ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် စကားပြောသော ဗွီဒီယိုတခု ~ Nge Naing
Saturday, November 27, 2010 Nge Naing 61 comments
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ရဲ့ အသံတိတ် ဗွီဒီယိုတခု ထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ရဲ့ အသံနဲ့ ဗွီဒီယိုတခုကို ဒီနေရာက ကူးယူပြီး ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ အသံတိတ် ဗွီဒီယိုကို အခြေခံပြီး "ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်ကို နေရာပြောင်း" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ VOA က တင်ထားတဲ့ သတင်းတပုဒ်ကိုလည်း ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ We fight we win blog မှာတော့ အသံတိတ် ဗွီဒီယိုကို ဖေါ်ပြထားပြီး ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကို အင်းစိန်ထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခံရတာ ဖြစ်ကြောင်း ဆောင်းပါးကို တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဗွီဒီယိုနှစ်ခုကို ယှဉ်ကြည့်ပါက အသင်္ခါရတရားရဲ့ မတည်မြဲခြင်း သဘောသဘာဝကို လူတိုင်းမြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထောက်လှမ်းရေးကွန်ယက်ကိုပြန်ဖွဲ့မှုကြောင့်ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ခင်ညွန့်အားအင်းစိန်ထောင်သို့ပြောင်းရွှေ့ 
khin nyunt from 88bigguy on Vimeo.
ယခင် စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ နှင့် ၀န်ကြီချုပ် ဟောင်း ဖြစ်သူ
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့် နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်ဝင်းရွှေ အား ရန်ကုန်မြို့ကမ္ဘာအေး ရှိ
နေအိမ် မှ အင်းစိန် အကျဉ်း ထောင်သို့ပြောင်းရွှေ့ လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန် မြို့ သတင်းတပ် ဖွဲ့ မှ
အမည် မဖော် လို သည့် အရာ ရှိ တစ်ဦးက Freedom News Groupသို့ အတည် ပြုပြောကြားသည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ က မန္တလေး မြို့ မှ အပြန် ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ် တွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် အမိန့် မနာခံမှု ၊ လာဘ်စားမှု ၊မရိုးမသား လုပ်မှု များ ဖြင့် ရာ ထူး မှ ဖယ်ရှာခြင်း ခံခဲ့ရ ခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ သည် နိုင်ဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် မှ အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခံရခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ် ကြီး ခင်ညွှန့် အား အင်းစိန် အကျဉ်းထောင် သို့ ပြောင်းရွှေ့ ပြစ်ဒဏ်ပြောင်း လဲ ခံယူရန် မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲတပ် ဖွဲ့ ရဲချုပ် ဗိုလ်မှုးချုပ် ခင်ရီ ၊ရန်ကုန် တိုင်း ရဲ တပ်ဖွဲ့ မှုး ၊ သတင်းတပ်ဖွဲ့ မှုး၊ အကျဉ်းဦးစီးဌာ န ညွှန်ကြားရေးမှုး၊ အကျဉ်း ဦးစီး ဌာန အင်းစိန် အကျဉ်းထောင် ထောင်ပိုင် နှင့် အခြား တာဝန် ရှိ သူများ လာရောက် တွေ့ ဆုံ ပြီးနောက် အင်းစိန် အကျဉ်းထောင် သို့ ထိုနေ့ မှာ ပင် ရွှေ့ ပြောင်း ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု သိရသည်။
အတည်မပြု နိုင်သည့် သတင်းများ အရ လည်း မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ က ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့် အား ၎င်း ၏ ယောက်ဖ ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ သန်းငြိမ်း အား ရွေးကောက် ပွဲ တွင် ပါဝင်လာစေရန် အတွက်နေပြည်တော် အထိ ခေါ် ယူ တွေ့ ဆုံက ပါးနပ် စွာ အသုံးချ ခဲ့ သည် ဟု သိရှိရသည်။
ယခင် ကကလှမ်း မှ အရာရှိ ဟောင်း တစ်ဦးက မူ “ဒါ သူတို့ သက်သက် မဲ့ စွပ်ဆွဲ တာပါ။ လူထု အုံကြွှမှု ဖြစ်ရင် ဗိုလ်ချုပ်ကဒေါ် စု မလွတ်သေး ဘူး ဆိုရင် ပြည်သူတွေ ရှေ့ မှ သူ့ အမှား ကို ၀န် ခံပြီး ရင် ဦးဆောင် မှု ပေးမယ် ဆို လို့ လုပ်လိုက်တာ။
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ် ကြီး ခင်ညွှန့် သည် ၎င်း ၏ ကွန်ယက် ထူထောင် နိုင်ရေး အတွက် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ နှင့် နေပြည်တော် တွင် တွေ့ ဆုံစဉ် က ၀ တပ်ဖွဲ့နှင့် ရှမ်းမြောက် အဖွဲ့ များ ကို မတိုက်သေး ရန် အကြံပေး ခဲ့ပြီး ၎င်း က မူ ၀ လူမျိုးထိပ်တန်း စီးပွား ရေး လုပ်ငန်း ရှင် တစ်ဦး ထံ မှ ၎င်း ကွန်ယက် အတွက် ငွေကြေး မြောက် မြား စွာ ရယူ ခဲ့သည်။
စာရေး ဆရာ တစ်ဦး လည်း ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း တစ်ဦး က မူ “ဒေါ်စု လွတ်ပြီ ဆိုတော့ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့် ကို အပြင် မှာ ဘယ်ထား တော့ မလဲ ရန်ကုန်မှာက လက်ရှိ စစ်အစိုးရ ကို မကြည်တဲ့ figure တွေ ကပိုများလာတာကို သူတို့ ပေါ် လစီက တော့ တစ်ယောက် ၀င် ၊
တစ်ယောက် ထွက် ပဲ ဟု ပြောကြားသည်။
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့် အား ရာထူး မှ ဖယ်ရှားပြီးနောက် စစ်ထောက် လှမ်းရေး အရှိများ အားထောင်ဒဏ် နှစ်၁၀၀ ကျော်ထိ ချမှတ် ခဲ့သည်။ စစ်ထောက်လှမ်းရေး က ပိုင်ဆိုင်သည့်A 21 ဆပ်ပြာ၊ခိုစိမ်းဖိနပ်၊ စူပါ ဂျာနယ်၊ စေတမန်တေးသံသွင်း၊ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး ဂျာနယ် တို့ ကို ယခု
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့် ဆွေ မှ လွှဲပြောင်း ရယူ လိုက်သည်။
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့် ၏ ကျေးဇူးရှင် ဖြစ်သူ မြန်မာ့ ဆိုရှယ် လစ် လမ်းစဉ် ပါတီ ဥက္ကဌ ဟောင်းနှင့်
အာဏာရှင် ဟောင်း ဦးနေ၀င်းမှာ ၂၀၀၁ ခုနှစ် တွင် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ချမှတ် ခံရပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ် တွင်
ကွယ် လွန် ရာဉ် ခေါင်းတလား တွင် နာမည် ပင် ရေး ထိုး ခြင်း ကို စစ်အစိုးရ က ခွင့် ပြု ခဲ့ခြင်း မရှိချေ။
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့် နှင့် ဇနီး မောင် နှံ တို့ နှစ်ဦး သည် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် ၏ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ မိုက်ကယ် အဲရစ် ကွယ် လွန် စဉ်က အစောဆုံး ၀မ်းနည်း ကြောင်း သ၀ဏ် လွှာ ကို အင်္ဂလိပ် ၊မြန်မာ နှစ် ဘာသာဖြင့် ရေး သား ပေး ပို့ ခဲ့သူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
၎င်း တို့၏ သား နှစ်ဦး ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှုးကြီး ဇော်နိုင်ဦး နှင့် Bagan Cyber Tech တည်ထောင်သူ ဒေါက်တာ
ရဲ နိုင်ဝင်းမှာ ထောင်ဒဏ် နှစ် ငါးဆယ် ကျော်စီ အပြစ်ပေးထား ခြင်းခံရသည်။ သမီးဖြစ်သူ သင်းလဲ့လဲ့ဝင်းမှာမိသားစု နှင့် အတူ နေအိမ် တွင် အကျယ်ချုပ် ပြစ်ဒဏ် ခံယူနေရသည်။
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့်သည် ၎င်း ၏ နေအိမ် တွင် အကျယ်ချုပ် ခံယူပြီးနောက် အင်းစိန် ထောင်
သို့အသွားတွင် ဘုရားရှိ ခိုးပြီး ဇနီး ဖြစ်သူ နှင့် လွယ် အိတ် ကလေး လွယ်ကာ ထွက် ခွာသွားသည်။
နေပြည်တော် ရှိ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန မှ အရာရှိ တစ်ဦးက ထောင်ဒဏ် ၄၄ နှစ် ချမှတ် ခံရသည့်
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့် အား အင်းစိန် အကျဉ်းထောင် သို့ပြောင်းရွှေ့ပြစ်ဒဏ် ခံယူရန် စီစဉ်ရ
ခြင်းသည် ၎င်း ၏ အာဏာ ပြန်လည် ရရှိရန် အားထုတ် ကြိပမ်းမှုများကြောင့် ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။
အာဏာ ပြန်လည် ရယူရန် ကြိုပမ်းမှု ဖြစ်စဉ် နှင့် ပတ်သက် ၍ ထိုအရာရှိက “သူ့ ကို ဘာမှ အစိုးရ က ချုပ်ချယ်မထားဘူး သူ့ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် တွေ ရဲ့ နာရေး တွေ ၊ ဘာသာရေး နဲ့ ပတ်သက် တာတွေ ကို ရန်ကုန် တိုင်း ကို သတင်းပို့ ပြီးရင် သွား ခွင့် ပြုတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူက မရိုးမသားလုပ်လာတာတွေရှိတယ်။ သူ့ ထောက်လှမ်းရေး ကွန်ယက်ကို ပြန်ဖွဲ့ တယ် ။ ရွေးကောက် ပွဲ မတိုင် ခင်မှာ သူ့ ရဲ့ ကွန်ယက်တွေ က ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး နှစ်ယောက် ရဲ့အိမ် ထိ penetrate
လုပ်လာတာတွေ ရှိတယ်။ နောက်ဆုံး သူ့ ရဲ့Net Work တွေ ကို အကုန် မိတော့ မှ သူ့ ကို ဖမ်းလိုက်တာ။ အစိုးရကသူ့ ကို တရား ပြန်စွဲမယ်ထင်တယ် ဟု အဆိုပါ အရာရှိ က Freedom News Group သို့ပြောသည်။
Posted in: ဗွီဒီယို,မှတ်တမ်း
November 27, 2010 at 11:42 PM Reply
27 Nov 10, 13:21
အနာဂါတ်လမ်း: ရောက်ဖြစ်ပါတယ်ငယ်နိုင်ဘလော့မှတဆင့် ဒေါင်းမာန်ဟုန်ဘလော့ကိုသွားလည်ဖြစ်ပြီး ဒေါ်စု နဲ့ သားငယ် တို့ ရွှေတိရုံဘုရားဖူးသွားတဲ့ ပုံတွေကိုကြည့်သွားဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးပါ။
We fight we win ကနေပြီး ဗွီဒယိုရော ဆောင်းပါးကိုပါ ကူးယူဖေါ်ပြလိုက်လို့ အသံတိတ်ဗွီဒယိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါင်းတမန်ကို ညွန်းထားတာကို ကျွန်မပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။
November 28, 2010 at 5:52 AM Reply
စာလုံးပေါင်း မှားနေသလားလို့။ ဗွီဒယို မဟုတ်ဘူးထင်တယ် :)
November 28, 2010 at 6:57 AM Reply
လုံးကြီးတင်တလုံး ထပ်ထည့်ပေးပြီး ပြင်လိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
November 28, 2010 at 9:58 PM Reply
ဒီိပို့စ်ကို တင်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း လူတထောင်နီးပါး အကြိမ် တထောင်ကျော် လာလည်သွားတာ တွေ့ရတဲ့အတွက် ဘလော့ဂ်သက်တမ်း တနှစ်ကျော်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတတဲ့နေ့ 13/11/10 က တင်တဲ့ပို့စ် http://nge-naing.blogspot.com/2010/11/blog-post_13.html ကလွဲရင် ၂၄ နာရီအတွင်း လူအ၀င်များဆုံးပို့စ် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘာမှ ရေးထားခဲ့ခြင်း မရှိပေမဲ့ အထူးစိတ်ဝင်စားကြတာ သိသာပါတယ်။ ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားအောင် ဒီပို့စ်မှာ ကိုမွန်းအောင် သီဆိုထားတဲ့ "ဧည့်ဆိုး" ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးတပုဒ်ကို ထပ်ဖြည့်ချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျေးဇူးပြုပြီး လာလည်သူများထဲမှာ ကိုမွန်းအောင် သီဆိုခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတိုက်ပွဲ သီချင်းခွေထဲက "ဧည့်ဆိုး" သီချင်းစာသားကို မှတ်မိနေသူများ ရှိရင် မှတ်ချက်နေရာမှာ ရေးထားပေးခဲ့ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
November 28, 2010 at 11:19 PM Reply
“မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်သွားမှန်းမသိ လူတစ်ထောင်နီးပါး ရောက်ရှိလာလေ၏”
သိုင်းဝတ္ထုထဲကလို အဆင့်မြင့် သိုင်းသမား မဟုတ်ပဲ အဆင့်မြင့် ဘလော့ဂါ ဖြစ်လာပြီလို့ပဲ နာမည်တပ်ရတော့ မှာပေါ့ဗျာ။ :-)
November 30, 2010 at 11:28 PM Reply
အခုလို စုစည်းတင်ပြပေးတာကျေးဇူးပါငယ်နိုင်... ဖထီးက ခင်ညွန့်ပြောတာတွေကို ယုံကြည်သွားခဲ့သလား စဉ်းစားမိတယ်....
မြန်မာပြည် ဒီလောက် ဆိုးရွားသွားခဲ့တဲ့ အဓိကတရားခံ နံပါတ် ၂ ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ပါ (၁) says:
January 15, 2012 at 3:05 PM Reply
မြန်မာပြည် ဒီလောက် ဆိုးရွားသွားခဲ့တဲ့ အဓိကတရားခံ နံပါတ် ၂ ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ပါ (၁)
နိုင်ငံတကာ (အထူးသဖြင့် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စစ် ကလင်တန်) ရဲ့ ဖိအားပေးမှုကြောင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ စတုတ္ထအကြိမ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးရာမှာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ကို လွှတ်လိုက်တာဟာ စစ်အုပ်စုက သူတို့ ကို ပြည်သူတွေက ဘယ်လောက် ခွင့်လွှတ်နိုင်လဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်ကြည့်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ဒီလောက် ဆိုးခဲ့တဲ့လူဟာ ပြန်လည် ထင်ပေါ်လာနိုင်သေးလား ဆိုတာ စမ်းကြည့်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူလုပ်ခဲ့ တာ ကောင်းခဲ့တာတွေရှိတယ် ဘာဘာညာညာ။
မြန်မာပြည် ဒီလောက် ဆိုးရွားသွားခဲ့တဲ့ အဓိက တရားခံ ထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ပါတယ်။ တရားခံ နံပါတ် ၁ ဟာ ဦးနေ၀င်းဆိုရင် တရားခံ နံပါတ် ၂ ဟာ ဦးခင်ညွန့် ပဲ။ ၈၈ မှာ အတိုက်အခံ တွေဘက်က ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့ ဖို့နှောင့်နှေးခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေမှာ သပိတ် တန်ပြန်ရေး ဖော်ဆောင်သွားတာ သူ နဲ့ ထောက်တွေပဲ။ ၈၈ မှာ ခေါင်းဖြတ်ပြ၊ စက်ရုံတွေဖောက်ပြ မင်းမဲ့ စရိုက်ဆိုတဲ့ ဘက်ကို လုပ်ပြသွားတာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့ တချို့ လူငယ်တွေ "၈၈ မှာ တပ်မတော်က ကယ်တင်လိုက်ရတယ်" ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ရဲ့အလှည့်စားခံလေးတွေ ဖြစ်သွားတာပဲ။ ဒီနောက်မှာ သပိတ်နှိမ်နှင်းရေးတွေကို လူမဆန်အောင် ကြူပင်ခုတ် ကြူငုတ် မကျန် လုပ်ခဲ့တာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ပါပဲ။
ရေကြည်အိုင် လိုမျိုး နာမည်ဆိုး နဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ စစ်ကြောရေးစခန်းတွေက ငရဲခန်း နှိပ်စက်ခန်းတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် စနက်တွေချည်းပါပဲ။ ဆိုင်ကယ် မောင်းခိုင်းတာ က အစ သောက်တဲ့ ရေထဲ မာကျူရီ ထည့်ပြီး ဦးနှောက်ပျက်အောင် လုပ်တဲ့အထိ ဆိုးရွားခဲ့တာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ပါပဲ။
ရေကြည်အိုင်ကို ၀င်သွားတဲ့ လူ မှန်သမျှ အကောင်းအတိုင်း ပြန်ထွက်လာတယ် ဆိုတာ အလွန်ရှားပါတယ်။ လူမသိ သူမသိ လက်လွန်သွားလို့ သေသွားတဲ့ လူတွေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆိုတာ ရေတွက်လို့ မရပါဘူး။ တကယ်တော့ မြန်မာ တပြည်လုံးကို အကြောက်တရားနဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တာမျိုးကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ မလုပ်တတ်ခဲ့ပါဘူး။ ည အချိန်မတော် အိမ်တံခါး လာခေါက်ပြီး "ညီလေး၊ အစ်ကိုတို့ နဲ့ ခဏလိုက်ခဲ့ပါ" လို့ဘယ်တော့ များ အခေါ်ခံရမလဲ ဆိုတဲ့ အကြောက်တရားမျိုးကို လူတွေစိတ်ထဲ ရိုက်သွင်းခဲ့တာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ပါ။ နိုင်ငံရေး ဆိုတာ လုပ်တာနဲ့ သချိင်္ုင်းကုန်းပဲ ပြေး မြင်အောင် လုပ်ထားတာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ပါ။
January 15, 2012 at 3:06 PM Reply
မြန်မာပြည်ကို ဒီလောက် ဆိုးရွားသွားစေခဲ့တဲ့ အဓိကတရားခံ နံပါတ် (၂) ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ပါ (၁) says:
January 15, 2012 at 3:08 PM Reply
January 15, 2012 at 3:09 PM Reply
မြန်မာပြည် ဒီလောက် ဆိုးရွားသွားခဲ့တဲ့ အဓိကတရားခံ နံပါတ် ၂ ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ပါ (၂) says:
January 15, 2012 at 3:12 PM Reply
စစ်သားတွေဟာ မျက်ကန်းမျိုးချစ်နဲ့ ငါတကောကော အမှားတွေလုပ်၊ တိုင်းပြည်ကို စစ်တပ်လို အုပ်ချုပ်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ တကယ်တော့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ချည်းပဲ ဆိုရင် စစ်တပ်က ဒီလောက် ဖိနှိပ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ စစ်သားစစ်စစ် မဟုတ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် လို ပါးပါးနပ်နပ် နဲ့ ကောက်ကျစ်တဲ့ သူကြောင့် သာ စစ်တပ် သက်ဆိုးရှည်ခဲ့တာပါ။ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ဟာ အာဏာရှင်တွေရဲ့ ကယ်တင်ရှင်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ဟာ တပ်ထဲမှာ နေရာပေးခြင်း ခံခဲ့ရတာပါ။
ဦးနေ၀င်း ဆင်းပြီး သူ့ သြဇာခံတွေလဲ ထည့်မရတဲ့ အဆုံးမှာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ကို နောက်ဆုံးလက်နက်အဖြစ် သုံးခဲ့တာပဲ။ အဲ့ဒိအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်စောမောင် ဆိုတာ ရုပ်သေးပဲ။ နောက်က တကယ် လှုပ်ရှားခဲ့တာ တွင်း ၁ ၊ တွင်း ၂ နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မျိုးညွန့် တို့ ပဲ။ အဲ့ဒီ ၃ ယောက်မှာ စီမံခန့်ခွဲသူက ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေကိုလဲ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် တို့က အစက ဟန်ပြ အဖြစ် တင်ခဲ့တာပဲ။ နောက်မှ ဟန်ပြ အဖြစ် တင်ပေးလိုက်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် တို့ အပေါ် ရောက်သွားလို့ ခံလိုက်ရတာ။
သေနတ်ရှိမှ နေရာမြဲတဲ့ စစ်တပ်ထဲမှာ စစ်ကောင်းကောင်း မတိုက်တတ်၊ စစ်တပ်ကျောထောက် နောက်ခံ မရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ဟာ သူ့ အခြေအနေ မကောင်းဘူး ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေး အုပ်စုတွေနဲ့စစ်ပြေငြိမ်းရေးလုပ်တာကို ဘန်းပြပြီး ဘိန်းမှောင်ခိုအဖွဲ့ ၊ လက်နက်ကိုင် သူပုန်အဖွဲ့ တချို့ ကို ငြိမ်း အဖွဲ့ တွေ အဖြစ် ဖန်တီးပြီး ကျောထောက် နောက်ခံရအောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုးကန့် တို့ ဟာ မြန်မာလူမျိုးထဲတောင် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ကြောင့် ငြိမ်းအဖွဲ့ တွေ သူတလူငါတမင်း လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်တာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ စစ်တပ် ကျောထောက်နောက်ခံ မရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် အဖို့ဒီလို ရေရှည် သွားတာဟာ နောက်ဆုံး သူ ဒုက္ခရောက်မယ် ဆိုတာကို သဘောပေါက်လာပါတယ်။
စစ်အစိုးရ အနေနဲ့ ရေရှည် သွားတာဟာ မကောင်းဘူးလို့ အစောဆုံး သဘောပေါက်တာလဲ ပါမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု ပုဆိုးဝတ် စစ်သားကြီးတွေ ကပြနေတဲ့ ဇာတ်ကို ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် က အရင် ရေးသွားခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာသာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ကို စစ်သားပုဆိုးဝတ်ဇာတ်ကို ကပြခွင့် ပေးခဲ့ရင် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် က အခု ပုဆိုးဝတ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ဗီလိန်နေရာထားပြီး ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် က မင်းသားနေရာကနေ ကမှာကို မြင်ခဲ့လို့စင်ပေါ်ကနေ ကန်ချခံခဲ့ရတာပါ။
တကယ်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ဟာ စစ်သား စစ်စစ် မဟုတ်ပါဘူး။ ရှေ့ တန်းတောင် ကောင်းကောင်း ရောက်ဖူးရဲ့ လား မပြောတတ်ဘူး။ စစ်တက္ကသိုလ် ဆင်းလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်သားတွေဟာ သေနတ်ကို သုံးပြီး ဥာဏ်နည်းနည်း နဲ့ ပဲ လုပ်တတ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ကတော့ ဥာဏ်ရှိပြီး ကောက်ကျစ်တဲ့သူပါ။ ကဲ.. ဘယ်သူဟာ ပို ကြောက်စရာ ကောင်းလဲ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် လို လူမျိုးကို ကျနော်တို့ အာဃာတ ထားစရာမလိုဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဆိုတော့ အဲ့ဒီအတွက် အချိန်မရှိလို့ ပဲ။ တခြား တိုးတက်ရေး လုပ်စရာတွေ အများကြီး ရှိနေတယ်။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတိုးတက်ရေးမှာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် လို လူမျိုးတွေက ၀င်မနှောင့်ယှက်နိုင်အောင်တော့ သတိထားနေရမယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် လုပ်ခဲ့တာတွေကိုတော့ မေ့မပစ်ပဲ ထပ်မခံရအောင် သင်ခန်းစာတော့ ယူရမယ်။
(ခင်ညွန့်ဘယ်သူလဲ စုစည်း တင်ပြချက်) - မြင့်မိုဦး
ခင် ရတနာ facebook
ဦးခင်ညွန့်က ဆင်ဖြုမရှင် နဲ့ စုဖုရားလတ် လို တဘက်က ပွဲခင်းပြီး တဘက်က လူသတ်တဲ့ အတွင်းကောက်သမားပါ - ၁ says:
"ဦးခင်ညွန့် ဘာတွေ လုပ်ခဲ့လဲ" .. ဟတ်လား ....
(၁) စစ်အစိုးရ တက်ခါစမှာ "ဦးခင်ညွန့် တဦးတည်းမှာ ပါဝါ အပြည့် ရှိတယ်" လို့ ပြောလို့ ရလောက်အောင်ကို ပါဝါ ရှိပါတယ်... အဲဒီအချိန်က ဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေ၊ NLD နဲ့ လူ့ ဘောင်သစ်ပါတီဝင်တွေကို ဦးခင်ညွန့်က ဘယ်လို ဘ၀တွေ ရိုက်ချိုးခဲ့တယ် ဆိုတာ ပြန်ပြောပြဖို့ လိုမယ် မထင်ပါဘူး... မန္တလေး သံဃာ့အရေးအခင်း ကနေစပြီး သံဃာတွေကို ဦးခင်ညွန့် ဘယ်လို ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ပါသလဲ....
(၂) အာဏာတည်ဆောက်ပုံ... ကြမ်းတဲ့နေရာမှာ ဦးခင်ညွန့်လောက် ဘယ်သူမှ မကြမ်းပါဘူး... သူ့ အထက်က ဦးစောမောင်၊ သူ့ လယ်ဗယ်ထက် တဆင့်မြင့် ဦးမြင့်အောင်၊ ဦးထွန်းကြည် တို့ အုပ်စု၊ သူတို့တွေကို ဘယ်လို ရှင်းသွားလဲ... အဲဒီအချိန်မှာ ဦးသန်းရွှေတောင် သူ့ ပါဝါ သူ အသာလေး စုနေရတဲ့ အဆင့်ဘဲ ရှိသေးပါတယ်...
နောက် ဦးတင်ဦး ကေစ့်... ဦးတင်ဦး မသေမချင်း လုပ်ကြံခံရတာ ဦးခင်ညွန့် ကြောင့်မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်တောင် ဦးခင်ညွန့်က အကာအကွယ် မပေးနိုင်ခဲ့တာဟာလည်း သူ့ ကိုယ်သူ လုံလှပြီလို့ တော့ ပြောလို့ မရနိုင်ပါဘူး...
နောက် သူ ဇွဲနေ၀င်းတို့ ဗယုတ်သုတ်ခ အလုပ်မှာ တချက်၊ သူ့ လူတွေ အလည်လွန်ပြီး ချီးနင်းမိနေချိန်မှာ တချက် အခြေပျက်သွားလို့ သာ ဦးခင်ညွန့် ခံလိုက်ရတာပါ။
(၃) အဲဒီတော့ "သမိုင်းမှာ ဘယ်သူ တာဝန်အရှိဆုံးလဲ" ဆိုတာ ပေါ်လောက်ပါပြီ။ ဦးသန်းရွှေက ဦးခင်ညွန့် လောက် မတော်ပါဘူး.... ဦးသန်းရွှေ မဟုတ်တာလုပ်ရင် လူသိတာ များတယ်... ဦးခင်ညွန့် မဟုတ်တာလုပ်တာ လူသိပ်မသိဘူး... ဦးခင်ညွန့်က ဆင်ဖြုမရှင် နဲ့ စုဘုရားလတ် ပုံစံ... တဘက်က ပွဲခင်းပြီး တဘက်က လူသတ်တဲ့ လူစားမို့ ပါ...
ဦးခင်ညွန့်က ဆင်ဖြုမရှင် နဲ့ စုဖုရားလတ် လို တဘက်က ပွဲခင်းပြီး တဘက်က လူသတ်တဲ့ အတွင်းကောက်သမားပါ - ၂ says:
January 16, 2012 at 8:40 PM Reply
ဦးခင်ညွန့် လုပ်သွားတာ အားလုံးဟာ ဆန်းဆန်းပြားပြား မပါပါဘူး...တကယ်တော့ "ဦးခင်ညွန့် သိပ်တော်ပါတယ်" လို့ပြောရင် ဗလ (စာရေးသူ) လို ငမြောက်ငခြောက်ကောင်ကလည်း အဲဒီနေရာလေးသာ ရပစေ မြန်မာပြည်ကို အနှစ် ၄၀ လောက် ပိတ်ထားလို့ ရတယ်လို့ ကြွေးကြော်ချင်ပါတယ်... ဘာကြောင့်လဲ မေးရင်တော့ "မြန်မာလူမျိုးတွေက မြန်မာလူမျိုးတွေမို့ ပါဘဲ"....
အခုတောင် ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ အရင် ထောက်လှမ်းရေးအတွက် အသုံးတော်ခံခဲ့တဲ့7days ၊ Voice ၊ Eleven တို့ က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မင်းကိုနိုင် ပုံတပုံ၊ ဦးခင်ညွန့် ပုံတပုံ တင်ပြီး စည်းရုံးရေး ဆင်းနေပါပြီ... အားလုံးကလည်း "ဘဘကြီး နေကောင်းလား" တို့၊ "အရမ်း ၀မ်းသာတာဘဲ" တို့ ဖြစ်ကုန်ကြရော....
ကျုပ်တို့ လူမျိုးကလည်း မေ့တတ်တာကိုး.... ၁၉၈၈ အရေးအခင်းဖြစ်တယ်... အရေးအခင်း ပြီးတာနဲ့အရပ်ထဲ နတ်ပွဲတွေနဲ့တခြိမ်းခြိမ်းပေါ့... အရေးအခင်းမှာတုန်းက မသေတဲ့ မိသားစုတွေက အရေးအခင်း ပြီးတာနဲ့ စစ်တပ်က လူ ၃၀ဝ၀ ပစ်သတ်တာကို မေ့ကုန်ပြီ... ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တယ်... မနက်ဖြန်ဘဲ ပေးမလိုလို လုပ်နေလိုက်တယ်... ကြားထဲမှာ ဖမ်းလိုက်တာ မနည်းမနော... အမှတ်မမှားရင် လွတ်တော်ခေါ်မယ်ကို ၁၉၉၁ - ၉၂ လောက်မှ ကြေငြာတာ... ရွေးကောက်ပွဲပြီးတယ်... ၁၉၉၃ ညီလာခံ ခေါ်တယ်... တနှစ် တကြိမ်၊ တခါတလေ ၂ ကြိမ်၊ ၃ ကြိမ် ခေါ်တယ်... လူတွေ ဆူပူမှာ စိုးလို့မြို့ တော်ဝန် မာရသွန် လုပ်တော့လည်း ပြေးလိုက်ကြတာဘဲ... တီကို ကား ရအောင်လို့ .... နအဖ ဖလား လှေသဘင်၊ မြင်းခင်းသဘင်၊ ဟော... ပြီးတော့ အမျိုးသားအားကစားပွဲတော်၊ နောက်တော့ ကျောင်းသားအားကစားပွဲတော် လုပ်ပေးတယ်....
ဒါတွေဟာ ပုံမှန်ပါဘဲ... တကယ်တော့ အလှည့်တွေထဲမတော့ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ဦးခင်ညွန့်လို လူတယောက်အတွက် တကယ့်ကို ပုံမှန် အလုပ်ပါဘဲ.... သူ့ အလုပ် သူလုပ်တာပါ.... ချီးကျူးစရာ မရှိပါဘူး....
ဦးခင်ညွန့်က ဆင်ဖြုမရှင် နဲ့ စုဖုရားလတ် လို တဘက်က ပွဲခင်းပြီး တဘက်က လူသတ်တဲ့ အတွင်းကောက်သမားပါ - ၃ says:
January 16, 2012 at 8:42 PM Reply
အခု အွန်လိုင်းမှာ ဟော့နေတဲ့ စကားလုံး.. "မြန်မာ့အင်တာနက်ရဲ့ တည်ထောင်သူ ဖောင်ဒါ ဦးခင်ညွန့်" ဆိုတဲ့ စကားလုံး.... မှားတယ်... ပုဂံဆိုက်ဘာကို ဦးခင်ညွန့် စလုပ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုက သူ့ အတွက်ပါ.... ဦးခင်ညွန့် လုပ်ခဲ့တာ တကယ်တော့ ကကလှမ်း အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ... သူမလုပ်ရင် သူ ကျန်ခဲ့တော့မယ်...
ပုဂံဆိုက်ဘာကို သူ့ အတွက် လုပ်ပြီး နောက်ကနေမှ ဦးခင်ညွန့်က လူတွေ မသုံးနိုင်တဲ့ ဈေး၊ လူတွေ မသုံးနိုင်တဲ့ စပိ(ဒ်) (အမြန်နှုန်း) တွေနဲ့လူတွေကြားထဲ ချထားပေးလိုက်တာပါ... ဒါလည်း လေးစားလောက်စရာ မရှိပါဘူး... ဦးခင်ညွန့်က နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူတယောက်... သူ့ အလုပ် သူလုပ်ရမှာပေါ့... သူ့ အလုပ် သူလုပ်တာ အတွက် ကျွန်တော်တို့ က ပိုပြီး ချီးကျူး ထောပနာပြုနေစရာ ဘာလိုလို့ လဲ.... ကောင်းတာကို ချီးကျူးခံချင်ရင်တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွား အလှူလုပ်ပါ... ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ်လှူ ... ဘုန်းဘုန်းတွေ ပြောတဲ့ သာဓု ဆိုတာကို ပီတိခံပေါ့...
နောက် လူတွေပြောတဲ့ မာလ်တီ မီဒီယာ... ဟားတိုက်ကာ ရယ်လိုက်ချင်ရဲ့... စက်ရှိတယ်.. ရုပ်ပြ.... "အင်တာနက်ကနေ စာသင်မယ်" တဲ့.. မီးမလာဘဲ...
အဲဒီတော့ အဲဒီဟာတွေဟာ အပိုတွေ ဆိုတာ သဘောပေါက်ပေါ့... ထမင်းကျွေးလို့ ထိုင်စားမယ့်လူကို ထမင်းသိုး ဟင်းသိုး ကျွေးတာလောက်ကို "စေတနာကောင်းတယ်၊ ရက်ရောတယ်" ဆိုပြီး ထုတ်ဖေါ် ချီးကျူးတဲ့သူတွေဟာ ထမင်းသိုးဟင်းသိုး ကြိုက်တဲ့သူတွေဘဲ ဖြစ်မှာပေါ့...
ဦးခင်ညွန့်က ဆင်ဖြုမရှင် နဲ့ စုဖုရားလတ် လို တဘက်က ပွဲခင်းပြီး တဘက်က လူသတ်တဲ့ အတွင်းကောက်သမားပါ - ၄ says:
နောက်တခု မိခင်နဲ့ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း... ဒါဟာ တပ်တွင်း အားပြိုင်ဖို့ လောက် နေရာတခုပါ... အဲဒီလိုနေရာမှာ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်တို့ က မတိုးဘူးလေ... ဦးခင်ညွန့် မိန်းမက ဒေါက်တာ ဆိုတော့ ပိုပြီး လူဝင်ဆန့် တော့ မိခင်နဲ့ ကလေးအသင်းကို တည်ခဲ့တာဘဲ....
နောက် အတန်းပညာရေးကို ဦးခင်ညွန့် ဘယ်လောက်ထိ ဖျက်ဆီးပစ်တယ် ဆိုတာ အားလုံး အသိပါ... မအောင်မနေရ အတန်းတင်ပညာရေးစနစ်ဟာ ဦးခင်ညွန့် ကြောင့် ပေါ်ထွန်းလာတာပါ.... အဲဒီ ပညာရေးစနစ်က ထွက်လာတဲ့သူတွေ အခုအချိန်ထိ နိုင်ငံတကာမှာ ဘွဲ့ ခြင်း တူရင်၊ ဒီပလိုမာခြင်း တူရင် ဘယ်သူက ခေါင်းမော့ရင်ကော့ ရပ်တည်နိုင်ပါသလဲ... လိုတာကို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် မပြင်ဆင်ထားရင် ဘာအဆင့်မှ မရှိလောက်အောင် အနှိမ်ခံရပါမယ်... အဲဒီလောက်ဆိုရင် ဦးခင်ညွန့် ဘာလဲ သိလောက်ပါပြီ...
ဦးခင်ညွန့်ဟာ သရုပ်ဆောင်ကောင်းသူပါ.. ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကြက်သမားဝင်းမြင့် ( ဦးလူချော မှန်ပါတယ်နော် ) ရဲ့ ညီလို့ မပြောရဘူး... ဘုရား ထီးတော်တင်ရင် ဦးခင်ညွန့်က ဆုတခုဘဲ တောင်းတယ်... "နိုင်ငံတော် သာယာဝပြောပြီး နိုင်ငံကြီး အေးချမ်းပါစေ" ... တဲ့.... ( နည်းနည်းတော့ စကားလုံး ကွဲနိုင်တယ်.... ) ဦးခင်ညွန့်က အဲဒီလို ဟန်ပါပါ မာန်ပါပါနဲ့ ဆုတောင်းလို့ဦးခင်ညွန့်ကို "လူကောင်း" လို့ထင်နေရင်တော့ မှားမှာပေါ့...
ကျွန်တော့် အိမ်ကနေ ရှေ့ တပြက ဘုရား ဦးခင်ညွန့် ထီးတင်တာကိုပဲ သတင်းရေးကြတယ်.... ကျွန်တော့်လမ်းထိပ်က ကကလှမ်း ရုံးမှာလည်း သူ့ တပည့် ထောက်လှမ်းရေးတွေက အပြစ်မရှိတဲ့ ပြည်သူတွေကို ဗျင်းနေတာ ကိုယ်တွေ့ မျက်မြင်.... အဲဒီတော့ ဦးခင်ညွန့် ရဲ့ စေတနာ၊ ဂရုဏာကို "မိချောင်းမျက်ရည်" လို့ သာ ပြောချင်တယ်...
ဦးခင်ညွန့် အကြောင်းထဲကနေ ကောင်းတာလေး တခု၊ နှစ်ခုလောက်တော့ ရှိတာပေါ့... တပ်မတော်ဘ၀ နေ၀င်ချိန်မှာ အာဏာကို ပုံစံပြောင်းယူဖို့ အကြံနဲ့ဒေါ်စုကို ဦးခင်ညွန့်က ဒီပဲရင်းမှာ ကယ်တဲ့ ပုံစံမျိုး ချိုးယူတာမျိုး၊ အာစီယံမှာ သူ့ တပည့် ဦးဝင်းအောင်ကို "အလှည့်အပြောင်း လာတော့မယ်" ဆိုတဲ့ စကား ထွက်စေတာမျိုး ကို ကြိတ်ပြီး ချီးကျူးမယ် ဆိုရင်ပေါ့....
ဒါပေမယ့် ဦးခင်ညွန့်ဟာ ကျွန်တော်တို့ ပုံနှိပ်စက်သမားတွေ ပြောသလိုပြောရရင် "မှင်အနက်ဘဲ... ဘယ်လိုမှင်နဲ့ မှ သူ့ ကို အရောင်ပြောင်းလို့ မရနိုင်ဘူး"... ဦးခင်ညွန့်ဟာ လူမကြမ်းဘဲ စိတ်ဓါတ်ကြမ်းတဲ့ အတွင်းကောက်သမားပါ...
(Credit - Kanyawpo)
ဦးခင်ညွန့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချစ်၍ဖြစ်စေ၊ မုန်း၍ဖြစ်စေ မြန်မာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာ ဦးခင်ညွန့်ဟာ စိုးမိုးနေရာယူနေဆဲပါ says:
ဦးခင်ညွန့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချစ်၍ဖြစ်စေ၊ မုန်း၍ဖြစ်စေ မြန်မာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာ ဦးခင်ညွန့်ဟာ စိုးမိုးနေရာယူနေဆဲပါ
January 17, 2012 10:20 PM
(( ဦးခင်ညွန့်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်ချက်ကို ရေးပြီး ဘလော့ဂ် C-Box တွေမှာ လိုက်ကြော်ငြာထားလို့ ဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှာ အဲဒီ C-Box တွေကနေ အမြောက်အမြား လာလည်နေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဦးခင်ညွန့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချစ်၍ဖြစ်စေ၊ မုန်း၍ဖြစ်စေ မြန်မာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာ ဦးခင်ညွန့်ဟာ စိုးမိုးနေရာယူနေဆဲဆိုတာတော့ ငြင်းလို့ ရမယ်မခင်ဘူး။
အဲဒီမှတ်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာဖတ်သူ အချင်းချင်းဆီက တယောက်နဲ့တယောက် သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာ ရှိရင်လည်း ကျွန်မ ဘာမှဝင်ပြောမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဓိကက သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ပေမဲ့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးဆွေးနွေးကြရင် အားလုံးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဆဲတဲ့အသုံးအနှုန်း ယုတ်ရိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းပါလာရင်တော့ အကုန်ဖျက်မယ်ဆိုတာ ကြိုတင်အသိပေးထားပါရစေ။
ကြော်ငြာသူကိုရော လာလည်သူအားလုံးကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
January 17, 2012 10:20 PM ))
မင်းသားခေါင်း ဆောင်းထားတဲ့ ဘီလူး ခင်ညွန့် ရဲ့ ပြည်ဖျက်လုပ်ရပ်တွေကို တိုတိုရှင်းရှင်း ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေကြောင့် စာဖတ်သူ အများကြီး လာဖတ်နေတယ် says:
January 19, 2012 at 11:14 PM Reply
မင်းသားခေါင်း ဆောင်းထားတဲ့ ဘီလူး ခင်ညွန့် ရဲ့ ပြည်ဖျက်လုပ်ရပ်တွေကို တိုတိုရှင်းရှင်း ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေကြောင့် စာဖတ်သူ အများကြီး လာဖတ်နေတယ်
(18 Jan 12, 07:08 AM)
(( အခုရက်ပိုင်းမှာ မငယ်နိုင်က ကိုမင်းကိုနိုင် တို့ ပို့စ် နဲ့ ဒေါ်စု ပို့စ်အသစ်တွေ ဆက်တိုက် တင်ထားတာကြောင့်ရော၊ ပြီးတော့ မင်းသားခေါင်း ဆောင်းထားတဲ့ ဘီလူး ခင်ညွန့် ရဲ့ ပြည်ဖျက်လုပ်ရပ်တွေကို တိုတိုရှင်းရှင်း ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေကြောင့်ရော စာဖတ်သူ အများကြီး လာဖတ်နေတာကို မြင်ရလို့ ရုရှက စစ်သားတွေက မခံချိမခံသာဖြစ်ပြီး မငယ်နိုင်ကို အသားလွတ် တိုက်ခိုက်နေတာ.. ))
(January 18, 2012 8:19 PM)
(( Observer - ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ စာအမြဲလာဖတ်ပြီး ကျွန်မ မအားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မကို မလိုလားသူတွေက အမြင်မတော်တာတွေ လာရေးထားတာတွေ့ရင် ၀င်ပြီးတော့ အမှန်ကို ပြောပြပေးတတ် အသုံးဝင်တဲ့ Links တွေကို လာတင်ပေးတတ်တဲ့ Observer တို့ Activist တို့ သမိုင်းလေ့လာသူတို့လို စာဖတ်သူတွေကို ဘယ်သူမှန်းမသိပေမဲ့ ကျွန်မ အမြဲတမ်းပဲ အသိအမှတ်ပြုပြီး ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။ နောက်ထပ် ညွန်းပေးရင်လည်း ကျွန်မဆီကနေပြီး စာလာဖတ်သူတွေဆီ တစုံတရာ အကျိုးရှိ အသိတိုးသွားစေတဲ့ Links တွေကိုပဲ ညွန်းပေးချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ စာသားပါ မှတ်ချက်ထဲက Link ကို မထည့်ချင်လို့ ဖျက်လိုက်ရတာကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ကျွန်မကို သူများက မဟုတ်မဟပ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး စော်ကားတိုက်ခိုက် စော်ကားတာကို မလိုလားသလို သူများပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကြောင်း ရေးထားတဲ့ Link တွေတာကိုလည်း အရေးပါ အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေ အဟုတ်တဲ့အတွက် ကျွန်မဆီမှာ မတင်ချင်လို့ပါ။ ဒီအတွက် Activist အနေနဲ့ ကျွန်မကို နားလည်ပေးလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ))
January 18, 2012 8:19 PM
ဗိုလ်ခင်ညွန့် ရဲ့ သားသမီး အမ်အိုင် (M.I.) တွေကြောင့် တနိုင်ငံလုံး ဇိမ်နန်းတွေ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ဖွင့်ရဲလာတာပါ says:
January 19, 2012 at 11:22 PM Reply
၂၀ဝ၇ ရွှေဝါရောင် သံဃာ့အရေးတော်ပုံရဲ့ အရှေ့မှာ ၁၉၉၆ ကျောင်းသားအရေးအခင်း ဆိုတာ ရှိခဲ့တယ်ကွယ့်။ "ဘယ်သူမှ အတိအကျ မသိဘဲ" လို့ ဆိုရအောင် အဲဒီ ကျောင်းသားတွေ မသေသေးဘူးကွယ့်။ အဲဒီ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ဆိုတဲ့ လူကြီးလဲ အပြင်ဘက်မှာ အရှင်လတ်လတ်ကြီး ညွှန်ကြားနေတာကွယ့်။
လှည်းတန်းမှာ နံနက်လင်းအားကြီး ကတ္တရာလမ်းပေါ်ထိုင်ရင်း လက်ချင်း ချိတ်တွဲထားတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို မီးသတ်ပိုက်နဲ့ အနီးကပ် အတင်း ထိုးခွဲပြီး ကားပေါ် ပစ်တင်ခိုင်းတာ အခု ရွှေဘိုထောင်က လွှတ်တဲ့ထဲ ပါတဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ရဲ့ လက်ရုံး ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်အောင် တဲ့။ အဲဒီတုန်းက ဗိုလ်မှူးချုပ် မဟုတ်သေးဘူး ထင်တယ်။ အမိန့်ရ အနီးကပ် ညွှန်ကြားသူပေါ့။
ထောက်လှမ်းရေးတစု ရက်ရက်စက်စက် နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ မန္တလေး သံဃာ့အရေးအခင်း ဆိုတာလဲ မှီလိုက်သူတွေ ရှိသေးတယ်ကွယ့်။ ကျောင်းသားတယောက်ကို မမိလို့ အမေနဲ့ နှမကို (အလယ်တန်းကျောင်းသူတောင် မချန်) ထောင်ထဲ ဖမ်းထည့်လိုက်တာကော ဗိုလ်ခင်ညွန့် တော်တဲ့ အချက်လို့ ပြောဦးမလား။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်က မျှားခေါ်တတ်လိုက်တာ ပေါ့နော်။
အဲဒီအချိန် တ၀ိုက် စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေ၊ သတင်းပေးတွေ စိုးမိုးချိန်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ရင်တောင် ဘော်ဘော်တွေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်း အကောင်းအဆိုး နည်းနည်းတောင် မဟ၀ံ့၊ ကချင်ပုဆိုးတောင် မ၀တ်ရဲ၊ အိမ်မှာ အန်တီစု ပုံတောင် မထားရဲတဲ့ သာမန် ကျောင်းသား ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀တွေ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါ ပုံပြင်တွေ၊ ယုံတမ်းစကားတွေ မဟုတ်ဘူး။ အမှန်က ဗိုလ်ခင်ညွန့် ဆိုတဲ့ လူကြီးအကြောင်း ပြောဖို့ ၀င်လာတာ မဟုတ်ဘူး။ ဖတ်ရတော့လဲ မနေနိုင်လို့။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ အဘညွန့်ရဲ့ ဘုန်းတော် ဘွဲ့တွေ ရွတ်နေကြပါစေ၊ ကျနော်တော့ ဗိုလ်ခင်ညွန့် မျက်နှာ မြင်တာနဲ့ ပထမဆုံး ပြေးမြင်မိတာက ကိုတင်နွယ် ဆိုတဲ့ ဇိမ်ခေါင်းကြီးပဲ။
အဘညွန့် ဘာလုပ်ခဲ့သလဲတော့ မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အဘညွန့်ရဲ့ သားသမီး အမ်အိုင် (M.I.) တွေကြောင့် တနိုင်ငံလုံး ဇိမ်နန်းတွေ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ဖွင့်ရဲလာတာတော့ အတော် ထင်ထင်ရှားရှားပဲ။ တဖက်ကနေ လှည့်ပြီး ကျေးဇူးတင်ရမယ် ဆိုရင် ကိုရင်ချက်ကြီးတို့ ပြည်တွင်းဖြစ်ကုန်ကြမ်း ရစေဖို့ စတင် မိတ်ဆက် ကျေးဇူးပြုခဲ့တာ အဘညွန့်ရဲ့ အမ်အိုင် (M.I.) တွေပဲ။
ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့် လွတ်ခြင်း၊ မလွတ်ခြင်းကို ကျနော်တော့ ဘယ်လိုမှ မခံစားမိပါဘူး။ အကျဉ်းကျနေသူ လွတ်မြောက်တဲ့အတွက် မုဒိတာ ပွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ဟာ တနိုင်ငံလုံးကို အကြောက်တရား နွံထဲကို ဆွဲချခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီး တခုကို ဦးဆောင်ခဲ့သူတယောက် ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ငြင်းဆို ဖျောက်ဖျက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။
January 19, 2012 at 11:38 PM Reply
အဘညွန့် ဘာလုပ်ခဲ့သလဲတော့ မသိပါဘူး၊ အဘညွန့်ရဲ့ သားသမီး အမ်အိုင် (M.I.) တွေကြောင့် တနိုင်ငံလုံး ဇိမ်နန်းတွေ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ဖွင့်ရဲလာတာတော့ အတော် ထင်ထင်ရှားရှားပဲ။ တဖက်ကနေ လှည့်ပြီး ကျေးဇူးတင်ရမယ် ဆိုရင် ကိုရင်ချက်ကြီးတို့ ပြည်တွင်းဖြစ်ကုန်ကြမ်း ရစေဖို့ စတင် မိတ်ဆက် ကျေးဇူးပြုခဲ့တာ အဘညွန့်ရဲ့ အမ်အိုင် (M.I.) တွေပဲ။
ဗိုလ်ခင်ညွန့် ကြောင့် တနိုင်ငံလုံး ဇိမ်နန်းတွေ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ဖွင့်ရဲလာတာပါ says:
January 19, 2012 at 11:40 PM Reply
မြွေပွေး ခင်ညွန့် ကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာ အရေခြုံ အရပ်သားအစိုးရရဲ့ အာဏာကို ထိပါးနိုင်သူတွေကို ကိုက်ခိုင်းမလို့ ဖြစ်နိုင်တယ် says:
January 19, 2012 at 11:49 PM Reply
ခင်ညွန့် စစ်ထောက်လှမ်းရေးက မတရား ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်တာကို မခံခဲ့ရဘူးတဲ့ လူတွေကတော့ ခံခဲ့ရတဲ့ အမြင်ကို ဘယ်သိမလဲဗျ။
ခင်ညွန့် ကြောင့် မိသားစုတွေ သားတကွဲ၊ မယားတကွဲ ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေ၊ လူ့ဘ၀ သက်တမ်း တ၀က်လောက်ကို ထောင်ထဲမှာ ကုန်ဆုံးခဲ့ရတာတွေ၊ နှိပ်စက်ခံရရင်း လက်လွန်လို့ အသက်ပါ ဆုံးခဲ့ရတာတွေ၊ ကိုယ့်အိမ် ကိုယ်နေတာတောင် ကျီးလန့်စာစား နေခဲ့ရတာတွေ၊ ..... ပြောရရင်တော့ ကုန်မှာတောင် မဟုတ်ဘူး။
ဒီလို ပြည်သူ့ဘဝပေါင်း များစွာကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ခင်ညွန့်လို လူမျိုးကို အကာအကွယ် ပေးတဲ့ သူတွေ facebook ပေါ်မှာလဲ အတော် များသားကလား။ ဒီလူကြီးရဲ့ လက်တံက တော်တော် ရှည်သေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ (ခင်ညွန့်ရဲ့ တပည့်ဟောင်းတွေ တော်တော်များများလဲ facebook ပေါ်မှာ ရှိနေတာ သေချာတယ်။)
ခင်ညွန့်ဟာ ထောက်လှမ်းရေး ဆိုတဲ့ အတိုင်း ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်၊ ကလိမ်ကကျစ် ဉာဏ်ကတော့ တော်တော် ကြောက်ဖို့ ကောင်းရိုးအမှန်ပဲ။ ခင်ညွန့်ဟာ မြွေပွေးလို လူမျိုးပါ။ ဒီလူကြီး ခင်ညွန့်ဟာ အခုလို ထောင်ကျတာလဲ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် မဟုတ်ပါ။
သွားလေသူကြီး သန်းရွှေက သူ့ကို ကိုက်မှာ ကြောက်ရတဲ့ မြွေပွေး ခင်ညွန့် ကို ပခြုပ်ထဲ ထည့်လိုက်တာပါ။
(အခု ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဖိအားအမျိုးမျိုးကြောင့် အရပ်သားအယောင်ဆောင်အစိုးရက တိုင်းပြည် အပြောင်းအလဲကို မလုပ်ရင် မဖြစ်တော့လို့ လုပ်ပြနေချိန်မှာ သူတို့ အာဏာ ထိပါးမှာ မြင်လို့ သူတို့အာဏာကို ထိပါးနိုင်သူတွေကို ကိုက်ခိုင်းမလို့လား မသိ၊) အဲဒီ မြွေပွေး ခင်ညွန့် ကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြန်ပြီပေါ့။
January 19, 2012 at 11:54 PM Reply
ဒီမိုကရေစီဘက်သားတွေက ရန် - ငါ မပြတ်ဘူး၊ နည်းနည်း အသာစီး ရလာရင် ဆက်ပြီး အနိုင်ယူဖို့၊ အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းဖို့ကို စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး says:
January 19, 2012 at 11:59 PM Reply
စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေက ရန် - ငါ ပြတ်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူတို့တွေက ပြတ်ပြတ်သားသား အသာစီးရပြီး အပေါ်စီးက နေပြီး လုပ်ချင်သလို လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီဘက်သားတွေက ရန် - ငါ မပြတ်ဘူး။ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ တွေကို ကျင့်သုံးတယ်။ နည်းနည်း အသာစီး ရလာရင် ဆက်ပြီး အနိုင်ယူဖို့၊ အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းဖို့ ဆိုတာတွေကို စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး။ "အားလုံး အတူတကွ လက်တွဲ နေထိုင်ရေး" ကို ပို ဦးစားပေးတယ်။
ဒါကြောင့် စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ထင်တိုင်းကြဲတာကို ခဏခဏ ခါးစည်း ခံခဲ့ကြရတယ်။
တခါတလေ တော့လည်း ကိုယ်လည်း ရန် - ငါ ပြတ်သူ ဖြစ်ချင်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ "ငါဟာ လူ၊ ငါဟာ တိရစ္ဆာန် မဟုတ်ဘူး" လို့ ပြန်စဉ်းစားလိုက်မိရင် ရန် - ငါ မပြတ်နိုင်သူ ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ "လူ အဖြစ်ကို အဆုံးရှုံးခံပြီးမှ ရလာမဲ့ အောင်နိုင်မှုဟာ ထိုက်တန်ရဲ့လား၊ တကယ်ကော လိုချင်ရဲ့လား" လို့ ပြန် စဉ်းစားစရာတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ခင်ရတနာ (facebook) မှ
မြစ်ဆုံ ကိစ္စ မှာရော၊ အကျဉ်းသား လွှတ်ပေးရေး ကိစ္စ မှာပါ စစ်အုပ်စုက သေသေချာချာ အစီအစဉ် ဆွဲပြီး ဒါရိုက်တာ ကောင်းကောင်းနဲ့ အပြလှမယ့် ဇာတ်သိမ်းခန်းတွေကို ရိုက်ကူး ပြသတာပါ says:
January 20, 2012 at 12:05 AM Reply
အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို အခုလို လွှတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဆိုက်ဝါး (စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေး) တွေ လုပ်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်လည်း ခံစားရတယ်။ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ဇာတ်ရှိန်ကို မြှင့်ပြီး သယ်သွားတယ်။ လူနည်းနည်း စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကိစ္စကနေပြီး လူအများ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်လာအောင် လုပ်ယူတယ်။ ပြီးမှ ဖြည့်ချလိုက်တယ်။ လူတွေအားလုံး ရင်သပ် ရှုမော စရာ ဖြစ်သွားတယ်။
မြစ်ဆုံ ကိစ္စ မှာရော၊ အကျဉ်းသား လွှတ်ပေးရေး ကိစ္စ မှာပါ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက သေသေချာချာ ပလန် (အစီအစဉ်) ဆွဲပြီး ဒါရိုက်တာ ကောင်းကောင်းနဲ့ ရိုက်ကူး ပြသတာ ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံရေးကို ကျေညက်တဲ့၊ အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်တဲ့ အစ်ကိုတချို့က ယူဆပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ ကောင်းကောင်း ရိုက်တဲ့ ရိုက်ချက်တွေ ဆိုတာကို ကျွန်တော်လည်း အဲဒီ အစ်ကိုတွေနဲ့ အမြင်တူပါတယ်။
သေတ္တာကြီးပေါ် ကျောက်တုံး တင်ပြီး ပြန်ချပေးတဲ့ အော်ပီကျယ် ကာတွန်း အဓိပ္ပါယ်မျိုး ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုး ဆိုတာကိုလည်း လက်ခံတယ်။ "ချုပ်ချုပ်ကြီးရဲ့ သမီးတော်တွေ ဌာနတွေ အားလုံးက တပြိုင်နက် ထွက်ပြီးမှ" ဆိုတာလေးကို ပိုပြီး သိချင်လာတယ်။ အစ်ကို သိထားတာတွေကို ရှယ်ပေးပါလား။
ဒီပဲယင်း လူအစုအပြုံလိုက် သတ်ပွဲရော၊ ABSDF ကချင် လူအစုအပြုံလိုက် သတ်ပွဲပါ သမိုင်းမှတ်တမ်း အမှန်အတိုင်း အပြည့်အစုံ ရှိသင့်တယ် says:
January 20, 2012 at 12:19 AM Reply
အခုတလော မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသားတပ်မတော် (ABSDF - NB) အတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြုတ်ထုတ်သတ် အတွင်းရေးတွေကြောင့် အသက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ အပြစ်မဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော် ၃၀ ကျော်ရဲ့ အရိုးတွေ တွန်နေတယ်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက် (ပြည်ထောင်စုနေ့) မှာ ကချင် ပြည်နယ်၊ ပါဂျောင်ဒေသမှာ အေဘီ မြောက်ပိုင်းက အာဏာရူးတစု ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူအစုအပြုံလိုက် သတ်ပွဲကို ခွင့်လွှတ်နိုင်သူတွေက ခွင့်လွှတ်လို့ ရပေမဲ့ သမိုင်းကိုတော့ မေ့လို့ မရဘူး။ ပြင်လို့ မရသင့်ဘူး။ သမိုင်း အပျောက် မခံသင့်ဘူး။ အဲဒီ အကျည်းတန်တဲ့ အေဘီ မြောက်ပိုင်း ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေကို အမှန်အတိုင်း သမိုင်းမှာ ရှိ ကျန်ရစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အရေးယူတာ၊ မယူတာက နောက် တပိုင်းပါ။
ထို့အတူ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်း ဆိုတာလည်း အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ ၁၀ဝ ကျော် လူမသိ သူမသိ၊ လူလိုသူလို မဟုတ်ဘဲ အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ အရေးအခင်းပါ။ ၂၀ဝ၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒီပဲယင်းမြို့ အနီးမှာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ဒီပဲယင်း လူအစုအပြုံလိုက် သတ်ပွဲကို ခွင့်လွှတ်နိုင်သူတွေက အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ရှေ့ရှု ချင့်ချိန်ပြီး ခွင့်လွှတ်ဦးတော့ အဲဒီ ဒီပဲယင်း နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီးရဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်း အမှန်အတိုင်း အပြည့်အစုံ ရှိသင့်တယ်။ နောက်လူတွေလည်း သိသင့်တယ်။
အခုဘဲကြည့်၊ ဘာမှ မကြာသေးတဲ့ နှစ် ကာလတွေ တုန်းက လုပ်သွားတဲ့ ညောင်နှစ်ပင်တောင် မသိသူတွေ ရှိနေပြီ။ "မအအောင်လို့ သမိုင်း သင်တာပါ" ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာသန်းထွန်းရဲ့ စကားကို ပြန် အမှတ်ရကြပါ။
ဦးခင်ညွန့်လို ပြည်သူများစွာရဲ့ ဘဝတွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့၊ အသက် ဆုံးစေခဲ့တဲ့ လူတွေကို ဒီအတိုင်း လွှတ်ပေးရင် လူထုက လက်ခံမှာ မဟုတ်လို့ ကိုမင်းကိုနိုင် တို့နဲ့ တွဲပြီး လွှတ်ပေးလိုက်တာပါ says:
January 20, 2012 at 12:27 AM Reply
ကျွန်တော် ဂရုပြုမိသလောက် နာမည်ကျော် ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နာမည်ကြီးအောင် ရောင်းကုန်ကို ဈေးကွက်တင်ရာမှာ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး လုပ်သလို သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီး အချိန် အကုန်ခံပြီး စနစ်တကျ လုပ်ယူတဲ့ လူ နှစ်ယောက်ကို တွေ့မိတယ်။ တယောက်က ကျော်ဟိန်းပါ။ သူ ဘုန်းကြီး မ၀တ်ခင် နှစ် အနည်းငယ် အလိုမှာ နှစ်ရှည် ပလန် (အစီအစဉ်) ချပြီး စနစ်တကျ လုပ်သွားတာပါ။ နောက် တယောက်က အခု မြို့မေတ္တာ ခံယူနေသူကြီး ဦးခင်ညွန့်ပါ။
"လူတွေဟာ တခုခုကို အများထဲက ရွေးရတော့မယ် ဆိုရင် ကိုယ် ကြားဘူးတဲ့ အရာ၊ ကိုယ်နဲ့ ယဉ်ပါးနေတဲ့ အရာကိုဘဲ ရွေးတယ်" ဆိုတာ စနစ်တကျ လေ့လာချက်များမှာ တွေ့ရှိရတဲ့ လူ့အကျင့်ပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ကောင်းတဲ့ ကိစ္စနဲ့ တွဲပြီးတော့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုးတဲ့ ကိစ္စနဲ့ဘဲ တွဲပြီးတော့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လူတွေရဲ့ မျက်စိထဲကို၊ နားထဲကို၊ ခေါင်းထဲကို ထပ်တလဲလဲ ၀င်အောင် လုပ်ပေးရမယ်။ အဲဒီလို လုပ်ထားနိုင်ရင် အဲဒီလူဟာ တစ်ခုခုကို ရွေးရတော့မယ်ဆိုရင် မသိစိတ်က နေပြီး သူ မကြာခဏ ကြားဘူးနေတဲ့ အမည်ကိုဘဲ ရွေးတော့တယ် ဆိုတာ အခြေခံ မားကက်တင်း နိယာမ တခုပါ။
ဒီ မားကက်တင်း (ဈေးကွက်တင်ခြင်း) နည်းပရိယာယ်ကို တီဗီ မင်းသားကြီး ဦးခင်ညွန့်က ကောင်းကောင်း နားလည်ပုံ ရပါတယ်။ လူမကြိုက်တဲ့ ပစ္စည်းကို လူကြိုက်များတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ တွဲထုတ်တာ ခေါက်ရိုးကျိုး နေတဲ့ မဆလ ရဲ့ မားကက်တင်း နည်းစနစ်ပါ။
ဦးခင်ညွန့်လို ပြည်သူအများရဲ့ အသက်၊ သွေး၊ ဘ၀၊ မျက်ရည် တွေနဲ့မှ အိပ်ပျော်စားဝင်ပြီး လူလုပ်ခဲ့သူတွေကို ဒီအတိုင်း လွှတ်ပေးရင် လူထုက လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို သိလို့ လူထုကြီးက အောင့်သက်သက်နဲ့ စိတ်လျှော့ပြီး လက်ခံသွားရအောင်လို့ အခုလို ဦးခင်ညွန့်ကို ကိုမင်းကိုနိုင် တို့နဲ့ တွဲပြီး ထုတ်လိုက်တာပါ။
“သြော် … ပေါ်လာပြန်ပြီ ဒီေ-ာက် ခွက်” says:
January 23, 2012 at 9:31 AM Reply
(တီဗီ မင်းသားကြီး ဦးခင်ညွန့် အပေါ် ဇာဂနာ ပြက်လုံး)
ဦးခင်ညွန့် တန်ခိုးသြဇာ ကြီးမားစဉ် ၂၀၀၃ ခုနှစ် အရှေ့ပိုင်းကာလတွေက မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား ညပိုင်း ၈ နာရီ သတင်း အစီအစဉ်မှာ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို နေ့စဉ်မပြတ် ပြသ လွန်းအားကြီးတဲ့အတွက် ၈ နာရီ သတင်း မင်းသား၊ တီဗီ မင်းသား လို့လည်း ပရိသတ်က ခေါ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
အဲဒီလို ည ၈ နာရီသတင်းမှာဖော်ပြပြီးလို့ မနက်ပိုင်း သတင်းစာရဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေမှာလည်း သူ့ပုံတွေ ချည်းပဲ ဖြစ်နေတာကြောင့် လူရွှင်တော် ဇာဂနာကတောင် သတင်းစာဖတ်နေတဲ့အချိန် သူ့ရဲ့ ဘေးမှာ ရေထည့်ထားတဲ့ ရေပုံးတပုံးထဲ ရေခွက်ထည့်ထား၊ အဲဒီရေခွက်ကို ရေပုံးထဲနှစ်လိုက် သတင်းစာ တရွက်လှန်လိုက်၊ ခွက်က ရေထဲကနေ ပြန်ပေါ်လာတော့ “သြော် … ပေါ်လာပြန်ပြီ ဒီေ-ာက် ခွက်” ဆိုပြီး ပြက်လုံးထုတ် နောက်ပြောင် ပြောဆိုခဲ့ဖူး ပါသေးတယ်။
အခုတော့ ဦးခင်ညွန့်ကို ပြက်လုံးထုတ်ခဲ့သူ၊ စစ်ထောက်လှမ်းရေးရဲ့ ဖမ်းဆီးခံဖူးသူ၊ ခေါ်ယူသတိပေး ခံဖူးသူ ကိုဇာဂနာ ကိုယ်တိုင် ဦးခင်ညွန့်ကို သွားတွေ့၊ နှုတ်ဆက်ခဲ့လို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်တာကိုခံနေရပါပြီ။ ဘာကြောင့် သူ သွားတွေ့တယ် ဆိုတာတောင် ပြန်ရှင်းပြ နေရပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လှုပ်တယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။ ဟို ဂျာနယ်မှာလည်း သူ့မျက်နှာ၊ ဒီဂျာနယ်မှာလည်း သူ့မျက်နှာ။ သူ့ပုံတွေ ခါတော်မီ ဖော်ပြတဲ့ ဂျာနယ်တွေလည်း အရောင်းသွက်တယ်လို့ ကြားနေရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် စစ်ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ကြီးကို အသက် ပြန်သွင်းမှာကိုတော့ လူတွေအားလုံးက မလိုလားကြပါဘူး။ ကျားသေကို အသက် မသွင်းနဲ့လို့ ဆိုသူတွေတောင် ရှိပါတယ်။ တချို့ကလည်း မြန်မာစိတ်ဓာတ် အရင်းခံ၊ ရိုးသားစွာနဲ့ လူတယောက်အဖြစ် ရှုမြင်ပြီး သံဝေဂရ နေကြပါတယ်။
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၁) says:
January 23, 2012 at 6:50 PM Reply
ကျွန်မဟာ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးလည်း မဟုတ်သလို အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းများ မှလည်း မဟုတ်ပါ။ စာပေဝေဖန်ရေးသမားလည်း မဟုတ်သလို အခုတလောမှာ
(တီဗီမင်းသားကြီး တဖြစ်လဲ ဂျာနယ်မင်းသားကြီး အင်တာဗျူးနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ဖော်ပြထားတဲ့) ဂျာနယ်တွေ ရောင်းကောင်းနေလို့ မနာလိုတတ်တဲ့ စီးပွားပြိုင် တစ်ဦးလည်း မဟုတ်ပါ။
သို့သော် အမှန်တရားကို တန်ဖိုးထား လေးစားသော၊ မိမိ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးကို ချစ်မြတ်နိုးစိတ်ရှိသော လွတ်လပ်ပြီး စစ်မှန်သော တရားမျှတမှုရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီကို လိုလားသူ ပြည်သူထဲမှ ပြည်သူတစ်ဦးပါဘဲ။
ကျွန်မ ပထမတစ်ကြီမ် စာမှာ ဖေါ်ပြခဲ့သလို ကျွန်မဟာ မဆလ ခေတ်ဆိုး စနစ်ဆိုးကြီးမှာ ကြီးပြင်းလာရတယ်။ သမ၀ါယမ တန်းစီ စနစ်တွေနဲ့ ဆီ တစ်ဆယ်သား၊ ဆပ်ပြာ တစ်ပိုင်း ရဖို့ အရေး သမ၀ါယမဥက္ကဌ လက်မှတ် အပြေး ယူရတဲ့ခေတ်၊ ပန်းဆိုးတန်းက "ရူဘီ MART" ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ " ပြည်သူ့ကုန်တိုက်" မှာ ချိုင်းထောက်နဲ့ ခြေပြတ်လက်ပြတ် စစ်သားတွေ၊ သာမန်လူတန်းစားတွေ၊ ဓာတ်ဆီကားတွေ တန်းစီ တိုးစားသလို တန်းစီလို့ ရတာလေးတွေ ကုန်တိုက်အောက်မှာ ပြန်ရောင်းရတဲ့ခေတ်ပါ။ နယ်တွေမှာဆို ကောင်စီ ဥက္ကဌက ဘုရင်ပဲ။
ဒီလို စနစ်ဆိုးကြီးမှာ ကျွန်မဟာ လူဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ၁၀၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူတွေ မတရား အသိမ်းခံရ၊ ၂၅ ကျပ်၊ ၇၅ ကျပ် တန် ငွေစက္ကူတွေ မတရား အသိမ်းခံရ။ ကိုဖုန်းမော် ကျောင်းသားအရေးအခင်းက စခဲ့ရတဲ့ ၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှုမှာ ကျွန်မ စတုတ္ထနှစ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ တစ်ဦးပါ။
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၂) says:
January 23, 2012 at 6:51 PM Reply
ကျွန်မတို့ရဲ့ ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းတွေ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ မိကောင်းဖခင် သားသမီးတွေ အများကြီး လုံထိန်းတွေက မတရားပြုကျင့်ခံခဲ့ရတယ်။ သွေးတွေ၊ မျက်ရည်တွေ ကျခဲ့ရတယ်။
အင်းယားကန်ဘောင်ကန်လမ်းကနေ အချုပ်ကား၊ ထောင်ကားတွေထဲကို အတင်းအကြပ် ပြွတ်သိပ်တင်လို့ အချုပ်ကားထဲမှာ တစ်စီးထဲမှာ လူပေါင်း ၁၄၁ ယောက် မွန်းကြပ်ပြီး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မတို့ ကျောင်းနေဘက်တွေ။
ရေကြည်အိုင် လို စစ်ထောက်လှမ်းရေး စစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာ ခဲဆိပ်ရေ တွေ သောက်ခိုင်းတာ၊ ခေါင်းပေါ်မှာ ရေ တစ်စက်ချင်း ချတာမျိုးတွေ။
ညအိပ်လို့ ကောင်းတဲ့ နာရီပြန် ၂ ချက်တီး ကျမှ အတင်းအဓမ္မ နှိုးပြီး မဟုတ်တာကော၊ ဟုတ်တာကော ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး ၀န်ခံခိုင်းတာတွေ။
ဒီလို စိတ်ဒဏ်ရာတွေ များစွာနဲ့ တချို့ စိတ်မနှံ့ ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေ (ဥပမာ။ ၁၉၈၈ မှာ အထက်တန်း ကျောင်းသားဘ၀ ဘဲ ရှိသေးတဲ့ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားလမ်းသွယ်မှာနေတဲ့ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်း အမှတ် (၂) ဗိုလ်တစ်ထောင် က ကျောင်းသားလေး ဖြစ်တဲ့၊ ဗိုလ်ရဲလှသား ကိုကျော်စွာ တို့လို စိတ်မနှံ့ ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေ။ (ကိုနေလင်းရဲ့ "လူရှင်သင်္ချိုင်းများ" စာအုပ်ကို ဖတ်ဘူးတယ်ဆိုရင် သိမှာဖြစ်တဲ့ ကိုကျော်စွာဟာ ထောင်ကျတုံးက အငယ်ဆုံး အဖြူအစိမ်း ၀တ်ထားတဲ့ ကျောင်းသားကလေးတစ်ယောက်ပါ။)
ကျွန်မ နဲ့ ကျွန်မ မိသားစုဝင်တွေ ဒီလိုမျိုး အနှိပ်စက် မခံရဘူးပါဘူး။ ထောင်ကျမခံရဘူးပါဘူး။ နှိပ်စက်ခံရဘူးလို့၊ ထောင်ကျခံရဘူးလို့ အခုလို ရေးနေတာ မဟုတ်ပါ။ ( ခြွင်းချက်။ ။ ၁၉၇၄ ဦးသန့်အရေးအခင်းမှာ ဘာနိုင်ငံရေး၊ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးတွေ ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ဘဲ ဘုမသိဘမသိ နဲ့ ကျွန်မဦးလေး အငယ်ဆုံး အင်းစိန်ထောင်မှာ ထောင်ဒဏ် ၆ နှစ် မတရား ကျခံခဲ့ရဘူးတာက လွဲရင်ပေါ့။ )
အဲဒီခေတ်က အင်းစိန်ထောင်မှုးကြီးက မစ္စတာ မက်က်နန်း ဆိုတဲ့ သူလို့ အမေ ပြောပြလို့ ကျွန်မ မှတ်မိခဲ့တယ်။ ဘုမသိဘမသိတဲ့ သူတွေတောင် ထောင်ချပစ်တဲ့ မဆလခေတ်ဆိုးစနစ်ဆိုး အရှိန်ကြောင့် မဆလ တစ်ခေတ်လုံးမှာ ကျွန်မ တို့ မိသားစုဝင်တွေ အစိုးရ စနစ်ဆိုးတွေကို မကျေနပ်ခဲ့ပေမဲ့ အလွန်အမင်း ရက်စက်မှု။ လူမဆန်မှုတွေကို ကြောက်ရွံ့ခဲ့ရလို့ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးတွေ နဲ့ ဝေးဝေး နေတတ်လာခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၃) says:
၁၉၈၈ မှာ ကျွန်မကိုယ်တိုင်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ဖြစ်လာခဲ့တော့ စာကြည့်တိုက်ရှေ့ ဟောပြောပွဲတွေမှာ ရှေ့ဆုံးက အားပေးခဲ့ရတာ။ ဘတ်စကားတောင် မရှိတော့လို့ လှည်းတန်းတက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်းကနေ ပုဇွန်တောင်အထိ လမ်းလျှောက်ပြန်ခဲ့ရဘူးပါတယ်။
၁၉၈၈ မှာ "စစ်တပ် ဆိုတာ သေနတ်ကို မိုးပေါ် ထောင် မပစ်ဘူး။ တည့်တည့် ပစ်တယ်" လို့ နိုင်ငံတော် (ပြည်သူပိုင်) မြန်မာ့အသံကနေ ခေါင်းပေါင်းစ တလူလူ နဲ့ အသက် ၇၀ နီးပါး ခန့် ရှိတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက် ပြောသွားခဲ့တာကို ကျွန်မ အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ နားနဲ့ ဆတ်ဆတ် အံသြစွာ ကြားခဲ့ရတာပါ။
"စစ်တပ် ဆိုတာ သေနတ်ကို မိုးပေါ် ထောင် မပစ်ဘူး။ တည့်တည့် ပစ်တယ်" ဆိုတဲ့ စကားကို ဘယ်သူ ပြောခဲ့ပါသလဲ။
( ပြည်သူတွေ မေ့နေတယ်လို့များ ထင်ပါသလား လို့ ဂျာနယ် ဆရာများကို မေးချင်မိပါတယ်။ )
မိန်းမတွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ယူပြီး - ------- ကြားထဲမှာဘဲ ခေါင်းထောင်နေတဲ့သူ။
ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်မှာ ငွေသားပေါင်းများစွာနဲ့ ကိုယ်တိုင်က ဇိမ်အပြည့်ခံပြီး ပြည်သူကို သမ၀ါယမ စနစ်နဲ့ တန်းစီ တိုးခိုင်းတဲ့သူ။
"မိုးပေါ် ထောင်မပစ်ဘူး၊ တည့်တည့် ပစ်တယ်" ဆိုတဲ့ လူကြီး လုပ်ခဲ့တဲ့ စနစ်ဆိုးအမွေတွေ။ အဲဒီ လူကြီး နဲ့ တကွ သူ့သားစဉ်မြေးဆက်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ။
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၄) says:
ဆက်လက် အသက်ရှင်ခွင့် ပေးခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရ အမွေဆိုးတွေကို သတင်းစာ ဂျာနယ်သမားတွေ ဂျာနယ်သက်တမ်း နုသေးလို့ မသိတာလား။ ပြည်သူတွေ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ မျက်ရည်တွေကို ပြက်ရယ်ပြုတာလား။ လစ်လျုရှု မှေးမှိန်အောင် လုပ်တာလား။
ကျွန်မ ဘယ်လို နားလည်ရမှာလဲ။
(၁)။7Day News Journal က အတွင်း မျက်နှာစာထဲမှာ မဆလ စနစ်ဆိုးရဲ့ တရားခံ အကြီးစား ခေါင်းပေါင်းစ တလူလူနဲ့ "မိုးပေါ် ထောင်မပစ်ဘူး၊ တည့်တည့် ပစ်တယ်" ဆိုတဲ့ လူကြီး ဓာတ်ပုံ နောက်ခံပုံကြီး ထားလို့။ အဲဒီ လူကြီးရဲ့ မျိုးဆက်က အကောင်းစားဆိုဖာတွေမှာ အခန့်သား ဟန်ပါပါ နဲ့ ထိုင်ပြီး အင်တာဗျုး အလုပ်ခံနေတဲ့ပုံကို ထည့်သွင်း ဖေါ်ပြတာ။
( http://3.bp.blogspot.com/-PqkPt5UnCig/TxopmnxQWaI/AAAAAAAAQS4/hD7bmhGv2k0/s1600/045.jpg )
(၂)။ Flower News Journal/ Vol-8 .No.3. January 17 ထုတ်မှာ ပါတဲ့ အလွန်ဆိုးဝါးသော စာသား ကောက်နှုတ်ချက် "ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း---- အပါအ၀င် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းချခံနေရသည့်သူများ --- လွတ်မြောက်" ဆိုတဲ့ စာသားကို ဘယ်လို နားလည်ရမှာလဲ။
(၃)။ Hot News Journal / January 19, 2012 နေ့စွဲထုတ် ဂျာနယ် ၏ အဆိုးဝါးဆုံး မျက်နှာဖုံးဓာတ်ပုံဖေါ်ပြမှု နှင့် "ပြည်သူ့အတွက် အတိုက်အခံ လုပ်ပေးနေတာပါ" လို့ မိမိကိုယ်မိမိ ကင်ပွန်းတပ်ထားသော စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ၏ သမီးတော် ဂျာနယ်တိုက် ပိုင်ရှင် အထက်တန်းစား လူ့အခွင့်ထူးခံခဲ့ရဘူးသူ သင်းကွဲသာကူးက ပြည်သူကပေးတဲ့လစာ နဲ့ တွက်ရင် တစ်လစာ မကတဲ့ ဆိုဖာကုလားထိုင် အကောင်းစားကြီး နဲ့ အပျံစား ဧည့်ခန်းမကြီး ထဲမှာ အခန့်သား စတိုင်အပြည့်နဲ့ ထိုင်နေတဲ့ "စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်တစ်ဦး" ကို ကြမ်းပြင်အောက် ကျုံ့ကျုံ့လေး ထိုင်ပြီး ( သူတို့ခေတ်က သုံးနှုန်းတဲ့ စကား နဲ့ဆိုရင် ) "ဂါရ၀ပြု" နေတဲ့ ဓာတ်ပုံ
( http://mandalaygazette.com/95212/creative-writing/my-thinking-different/attachment/405415_10150499684686374_582151373_9055675_812494271_n )
( "ပြည်သူ့အသံတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တင်ပြနေပါတယ်" လို့ ဆိုနေသူ သင်းကွဲ ဂျာနယ်လစ်က ကြမ်းပြင်အောက် ကျုံ့ကျုံ့လေး ထိုင်ပြီး "စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်တစ်ဦး" ကို "ဂါရ၀ပြု" နေတဲ့ ဓာတ်ပုံ)
မြင်တွေ့ ဖတ်ရှုရတဲ့ စာသားတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေဟာ ---
ပြည်သူ့မျက်ရည်ကို ခြေနဲ့ ဆေးသလို ခံစားရပါတယ်။
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၅) says:
January 23, 2012 at 6:53 PM Reply
ကျွန်မ ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးပါ အကြောင်းအရာ တွေဟာ လိုရင်သာ လိုနေမယ်။ ပိုတယ်များ ရှိသလား။
လောကပါလစောင့်နတ်မင်း နဲ့ တကွ သိကြားမင်းကို တိုင်တည်ပြီး မဟာပထ၀ီမြေကြီးကို သက်သေအမှုပြုပါတယ်။
မဆလ စနစ်ဆိုးကြီး နှင့် ၎င်းစနစ်ကို အကောင်အထည် ဖေါ်ခဲ့ကြသည့် သူများ (၁၉၆၂-၁၉၈၈)၊ စစ်အစိုးရ နှင့် န၀တ စစ်အစိုးရ စနစ်ကြီးကို အကောင်အထည် ဖေါ်ခဲ့ကြသည့်သူများ ( ၁၉၈၈-၂၀၁၁ ) နှင့် ၎င်းတို့၏ အဆွယ်အပါး အနွယ်ဝင်များ အားလုံးဟာ ကျွန်မတို့ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး နှင့် မှီတင်းနေထိုင်ကြ တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်သူပြည်သား များအားလုံးကို ကမ္ဘာအလည် မှာ မျက်နှာမွဲ ဖြစ်ရလေအောင်၊ အနှိမ်ခံရလေအောင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသူများ၊ သမိုင်းတရားခံများ၊ ရာဇ၀တ်ကောင်များဘဲ ဖြစ်ကြတယ် ဆိုတာကို ပြည်သူ့မျက်ရည်ကို မှင်လုပ်ပြီး ခံပြင်းလှတဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက စကားတွေကို ကျွန်မ ထုတ်ဖေါ် ရေးသားပါတယ်။
သမိုင်းတရားခံတွေ၊ မဆလတွေ၊ စစ်ရာဇ၀တ်ကောင် နဲ့ အနွယ်ဝင်တွေ အနေနဲ့ "မမောက်မာခဲ့ပါဘူး၊ မရက်စက်ခဲ့ပါဘူး၊ မတရားတာ မစားခဲ့ပါဘူး၊ ပြည်သူ့ ပိုင်ပစ္စည်းကို အာဏာနဲ့ အပိုင်မသိမ်းခဲ့ပါဘူး၊ မိမိ နေထိုင်နေတဲ့ အိမ်၊ စီးနေတဲ့ ကား၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အားလုံးဟာ နိုင်ငံတော် ဆိုတဲ့ ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာက ပေးတဲ့ လစာငွေ နဲ့ ခြစ်ခြုတ်ပြီး ၀ယ်ထားတဲ့ကားပါ၊ အိမ်ပါ၊ ချွေးနည်းစာတွေပါ" လို့ ပြည်သူတွေမျက်နှာကို တည့်တည့်ကြည့်ပြီး၊ ရဲရဲ ရင်ဆိုင်ပြီး ပြောရဲပါသလား။
"တိုင်းပြည်ကို မရောင်းစားခဲ့ပါဘူး၊ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး၊ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး၊ ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ကတော့ မပါပါဘူး" လို့ ဘယ်သူ ငြင်းရဲမလဲ။ ငြင်းပါ။
မငြင်းခင်မှာတော့ အမိမြန်မာပြည်က မြေကြီးကို လက်ထဲမှာ ဆုတ်ကိုင်ထားပြီးမှ မဟုတ်မမှန်တာ ပြောဆို လုပ်ကိုင်ခဲ့ရင် အရှင်လတ်လတ် မြေပြိုပါစေ၊ မြေမြိုပါစေ လို့ သစ္စာဆိုပြီးမှ ငြင်းချက်ထုတ်ပါ။
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၆) says:
January 23, 2012 at 6:54 PM Reply
စာဖတ်ပရိသတ်များ အားလုံး ကိုယ်စား ပြည်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ကျွန်မ မေးခွန်းတွေ မေးချင်ပါတယ်။
"ပြည်သူ့အသံကို လေးစားတယ်၊ ပြည်သူ့ဘက်က ရပ်တည်နေပါတယ်" လို့ အသံကောင်းဟစ်နေကြသော ဂျာနယ် များရှင့် -
မိမိတို့ ရပ်တည်နေတဲ့ stand မှန်ကန်ပါသလား၊ သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်း မှန်ကန်ပါသလား လို့ နဖူးပေါ် လက်တင်ပြီး စဉ်းစား မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ပါ။
ပြည်သူ့အသံကို မလေးစားချင်ရင် နေပါ။ ပြည်သူ့ ဘက်က မရပ်တည်ချင်ရင် နေပါ။ ပြည်သူကို မစော်ကားမိဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မတို့ တွေရဲ့ မျိုးဆက်သစ် ကလေးငယ် တွေကို သမိုင်းကြောင်း အမှန်ကို လိမ်ညာပြီး သင်းကွဲတွေကို သူရဲကောင်းဟန်နဲ့ ဂေါပကလို၊ တရားရှင် လိုလို ပွဲမထုတ်မိပါစေနဲ့ လို့တော့ အမှန်တရားကို ရဲဝံ့စွာ ပြောဆို ရေးသားပါတယ်။
"မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်" ဆိုပြီး တိုက်ခိုက်နေရဆဲ၊ ကြိုးစား ရယူနေရဆဲ ဖြစ်တဲ့ သတင်းဂျာနယ်လစ်များ၊ ဂျာနယ် အယ်ဒီတာများ၊ ဂျာနယ်များ အနေနဲ့ ကျွန်မ ရေးသားထားတဲ့ ဆောင်းပါးပါ အကြောင်းအရာတွေကို လူကြီးမင်းတို့ ဂျာနယ်တွေမှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထည့်သွင်း ဖေါ်ပြရဲပါသလား။
နိုင်ငံတော်ပိုင် သတင်းစာတွေ မှာ ၁၉၈၉ ကထဲ က မမြင်ချင်မှအဆုံး မြင်ခဲ့၊ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဒီလူ နဲ့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ မျက်နှာကို "ပြည်သူ့ဘက်တော်သား" လို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ ဂျာနယ်တွေမှာလဲ ထပ်တွေ့ ထပ်မြင်နေရဦးမယ် ဆိုရင်တော့ အော်ဂလီဆန်ပါတယ်၊ ဂျာနယ်ဆရာတွေရယ်။
ပြည်သူ့ မျက်ရည်ကို မသုတ်ပေးချင်ရင် နေကြပါ။ ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့၊ ဆရာတို့ရေ။
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၇) says:
January 23, 2012 at 6:55 PM Reply
သင်းကွဲတွေကို တရားရှင်လိုလို၊ သူတော်ကောင်း လိုလို ပွဲထုတ်တာကို လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
ကျွန်မ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာကို အလွန် လက်ခံပါတယ်။ လေးစားပါတယ်။ လူသားတိုင်းမှာ လွတ်လပ်ခွင့် ရှိရမယ်။ လူသားတိုင်း လွတ်မြောက်မှုကို လိုလားတယ်။ လူသားချင်း စာနာစိတ်ရှိရမယ်။ ဒါတွေကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်းကွဲတွေ လွတ်မြောက်ခြင်းအပေါ်မှာ မနာလိုစရာ မရှိသလို ဘာခံစားချက်မှ တစ်စုံတစ်ရာ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ မရှိတာတော့ အမှန်ဘဲ။
နောင်လာနောက်သား မျိုးဆက်သစ် တွေကို လိမ်ညာ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ သမိုင်းကြောင်း အမှားတွေကို သိသိကြီးနဲ့ ဆက်ညာပြီး အဆိပ်ပင် ရေလောင်းနေမယ် ဆိုရင် ----- "တိုင်းပြည်တာဝန် ကျေပြွန်တဲ့ ပြည့်သူ့အသံကို လေးစားသော၊ ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုသော ဂျာနယ်တွေပါ" လို့ မိမိတို့ကိုယ် မိမိတို့ ပြောရဲပါသလား။
ဒါပေမဲ့ အမွှန်းမတင်သင့်တဲ့ သူတွေကို ချီးမြှောက် တန်ဆာဆင်ပြီး အမွှန်းတင်တာဟာ ပြည်သူ့မျက်ရည်ကို လှောင်ပြောင်တာဘဲ။ စော်ကားတာဘဲ လို့ ပြည်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာ မြင်တယ်။
"လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်ပြောဆို လုပ်ပိုင်ရေးသားခွင့်" ဆိုတာ နိုင်ငံတော်သမ္မတက စလို့ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင် မည်သူကိုမဆို အဘက်ဘက်က မျက်နှာမလိုက် ဘက်မလိုက်ဘဲ ပြောဆို ဝေဖန် ထောက်ပြရဲရမယ်။ အမှန်တရားကို ထုတ်ဖေါ် ပြသရဲရမယ်။
( စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်ဟောင်း နှင့် မိသားစုဝင်တွေ၊ မဆလ စနစ်ဆိုးကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော် အနွယ်ဝင်တွေဟာ )) အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားချင်း အတူတူ ပခုံးချင်း သွားယှဉ်မိလို့ အကျဉ်းချခံရတာလား၊ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းချခံရတာလား ဆိုတာ၊ သူတို့တွေဟာ သင်းကွဲတွေ ဟုတ်လား၊ မဟုတ်ဘူးလား ဆိုတာကို သဲကွဲစွာ မတင်ဆက်နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ....................
ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ (၈) says:
January 23, 2012 at 6:56 PM Reply
"ချော်လဲရောထိုင်ပြီး ကျားသေကို မသိမသာ အသက်သွင်းကာ ရပ်တည်ချက်မမှန်သော သင်းကွဲ သာကူး လူတန်းစားတစ်ရပ်ကို ဒီမိုကရေစီ ခေတ်မှာ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း အရေခြုံ ထွက်ကပြဖို့ စင်တင်ပေးတဲ့ ပြည်သူမျက်ရည်ကို ခြေဆေးနေသော ဂျာနယ်များ" လို့ဘဲ ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ချင်ပါတယ်။
ကျွန်မ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလည်း မထောက်ခံပါ။ မဝေဖန်ပါ။ နိုင်ငံရေးပါတီများ အားလုံးကိုလည်း မထောက်ခံပါ။ မဝေဖန်ပါ။
စနစ်ဆိုး ခေတ်ဆိုးကြီး များကို ကျင့်သုံးခဲ့ကြသူ သမိုင်းတရားခံများအားလုံး၊ အခွင့်အထူးခံလူတန်းစားများ အားလုံးကို အလွန်ရွံ့ရှာ မုန်းတီး နာကျည်းသော ပြည်သူထဲက ပြည်သူ့ ဘက်တော်သား အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးလေးစားသူ ပြည်သူ တစ်ယောက်ပါ။
( သင်းကွဲတွေကို လူရာသွင်း၊ ကျားသေကို အသက်သွင်းချင်နေကြသော ဂျာနယ်များ )
ရင်းမြစ် - Chawchaw Mirror @ FB
ဦးခင်ညွန့်ဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ တစ်နည်းတစ်ဖုံ ပတ်သက်လာလိမ့်မယ် says:
January 25, 2012 at 12:29 AM Reply
ဦးခင်ညွန့် တလလျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာငါးထောင် လခ ရယူပြီး မြရိပ်ညို ဖေါင်ဒေးရှင်း နာယက တာဝန်ယူမည်
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်နဲ့ ၂ဝ၁၂ ခု ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း၊ ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဟောင်း ဦးခင်ညွန့်ဟာ မြရိပ်ညို ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး ဖောင်ဒေးရှင်းကို နာယက အဖြစ် ဦးဆောင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြရိပ်ညို ဖောင်ဒေးရှင်းကို စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဇေကမ္ဘာ ဦးခင်ရွှေက ကျပ်ငွေ သိန်းပေါင်း တစ်သောင်း မတည်ပြီး မနှစ်က အောက်တိုဘာလ အတွင်း တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ နယ်စပ် တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ ကျောင်းဆရာ ဆရာမတွေ အလုံအလောက် ခန့်ထားရေး၊ ဆေးရုံ ဆေးခန်းတွေ တည်ထောင်ရေး၊ ပညာသင်ဆု ပေးရေး စတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေး လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ ဒီဖောင်ဒေးရှင်းကို တည်ထောင်ခဲ့တာလို့ ဦးခင်ရွှေက အာအက်ဖ်အေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြရိပ်ညို ဖောင်ဒေးရှင်းမှာ နာယက အဖြစ် ဦးဆောင်ပေးမှု အတွက် ဦးခင်ရွှေက ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးခင်ညွန့်ကို အမေရိကန် ဒေါ်လာငါးထောင် လစဉ် ချီးမြှင့်သွားမယ်လို့လည်း ဇေကမ္ဘာ ကုမ္ပဏီနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်ဟာ အခုလ ၁၃ ရက်က လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်နဲ့ လွတ်မြောက် လာခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံရေး မလုပ်ဘဲ လူမှုရေးပဲ လုပ်မယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
လေ့လာသူ တချို့တော့ ဦးခင်ညွန့်ဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ တစ်နည်းတစ်ဖုံ ပတ်သက်လာလိမ့်မယ် လို့လည်း ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။
(RFA မှ ကူးယူ ဖော်ပြသည်။)
ဗိုလ်ချုပ်တွေ၊ အရပ်ဖက်က အရာရှိတွေက ခိုးထားတဲ့ ပြည်သူ့ငွေတွေကို ပြည်သူကို ပြန်ပေးရမယ်၊ ခေတ်ပျက်သူဌေးတွေက လာဘ်ထိုးပြီး သယံဇာတ ရောင်းစားလို့ ရလာတဲ့ ပြည်သူ့ငွေတွေကို ပြည်သူကို ပြန်ပေးရမယ် says:
January 25, 2012 at 1:46 AM Reply
မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးနေပြီ ဆိုပဲ...
ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးနေပြီ ဆိုရင် တပ်မတော်အရာရှိတွေရော၊ ရဲတွေရော၊ ထောက်လှမ်းရေးတွေရော၊ အရပ်ဖက်က အရာရှိတွေ (အကောက်ခွန်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ..... အရာရှိတွေ) ရော ပြည်သူ့ငွေတွေကို ခိုးထား၊ လာဘ်စားထားတဲ့ ဒေါ်လာ သန်းထောင်နဲ့ ချီတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ပြည်သူကို ပြန်ပေးရမယ်...
ခင်ရွှေ၊ အောင်ကိုဝင်း၊ တေဇ၊ ဇော်ဇော် ..... တို့လို ခေတ်ပျက်သူဌေးတွေက ဗိုလ်ချုပ်တွေကို လာဘ်ပေးပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့သယံဇာတတွေ ရောင်းစားခွင့် ရလို့ ရလာတဲ့ ဒေါ်လာသန်းချီပြီး ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံ ပြည်သူကို ပြန်ပေးရမယ်...
ခင်ရွှေ၊ အောင်ကိုဝင်း၊ တေဇ၊ ဇော်ဇော် ..... တို့က စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်တွေကို တနင့်တပိုး လာဘ်ပေးပြီး ပေါင်းရင်း ခေတ်ပျက်သူဌေးတွေ ဖြစ်လာကြတာ...
ထားစရာ မရှိအောင် ပိုက်ဆံ ပေါလာကြတာ...
ဒီ ခင်ရွှေ က အရင်က တပ်ကြပ်ကြီး ... ခင်ညွန့်နဲ့ ဆက်မိပြီး ခေတ်ပျက်သူဌေး ဖြစ်လာတာ...
အောင်ကိုဝင်း ဆိုတဲ့ ဆရာကျောင်း က မြစ်သား ကနေ မိန်းမ ကိစ္စ တခုနဲ့ ရှောင်လာရင်း ဘော်ဆိုင်း ဆိုတဲ့ ရွာလေးမှာ အရပ်ခန့် ကျောင်းဆရာ လုပ်ရင်း မောင်အေး နဲ့ဆက်မိပြီး ခေတ်ပျက်သူဌေး ဖြစ်လာတာ...
ဒေါ်ထူး သမက် တေဇ လည်း ကြိုင်ကြိုင် စပွန်စာ နဲ့ ဗမာတပြည်လုံး ရဲ့သစ်တောတွေ အပြောင်ခုတ်ပြီး ခေတ်ပျက်သူဌေး ဖြစ်လာတာ...
ပက်စီ ဦးသိန်းထွန်း သမက် ဇော်ဇော် က ရွှေမန်း နဲ့ပေါင်းပြီး ခေတ်ပျက်သူဌေး ဖြစ်လာတာ...
အဲဒီတော့ တိုင်းပြည်အတွက်၊ ပြည်သူတွေအတွက် ရရ မဲ့ ပိုက်ဆံတွေက ခင်ရွှေ၊ အောင်ကိုဝင်း၊ တေဇ၊ ဇော်ဇော် ..... တို့လို ခေတ်ပျက်သူဌေး လူ ၄-၅ ယောက် ခွဲ ယူသွားတော့ တိုင်းပြည်က စုတ်ပြတ်မြဲ စုတ်ပြတ်ဆဲ ဖြစ်ပြီး ခင်ရွှေ၊ အောင်ကိုဝင်း၊ တေဇ၊ ဇော်ဇော် ..... တို့ကတော့ ချမ်းသာကုန်တာပေါ့...
ခင်ရွှေ၊ အောင်ကိုဝင်း၊ တေဇ၊ ဇော်ဇော် ..... တို့လို ခေတ်ပျက်သူဌေး အားလုံးက တိုင်းပြည်ရဲ့သယံဇာတတွေ တူးရောင်း ခုတ်ရောင်းလို့ ရထားတဲ့ ဒေါ်လာ သန်းထောင်နဲ့ ချီတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ပြည်သူကို ပြန်ပေးရမယ်...
ဒီလိုပဲ စစ်ဖက်၊ နယ်ဘက် အရာရှိတွေက ပြည်သူ့ငွေတွေကို ခိုးထား၊ လာဘ်စားထားတဲ့ ဒေါ်လာ သန်းထောင်နဲ့ ချီတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ပြည်သူကို ပြန်ပေးရမယ်...
ခင်ညွန့်တို့လို ဗိုလ်ချုပ်တွေက ဘိန်းကုန်သည်တွေဆီက ဝေစု အကြီးစားတွေ ရှယ်ယာရပြီး အကြီးအကျယ် ပွနေကြလို့ မြန်မာပြည်ထဲဖြတ်သွားတဲ့ ဘိန်းကို မဖမ်းတာပါ says:
January 25, 2012 at 2:52 AM Reply
ခင်ညွန့်က လာဘ်မယူဘူး.. ၀န်ဆောင်ခပဲ ယူတာ.. အခု နေတဲ့ ခြံဝင်းကျယ်ကြီးနဲ့ နန်းတော်လို အိမ်ကြီးကလဲ ၀န်ဆောင်ခနဲ့ ဆောက်ထားတာ.. ပါမစ်တွေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ချပေးဖို့ လက်မှတ်ထိုးပေးရတဲ့ ဝန်ဆောင်ခလေ..
ခင်ညွန့်က မြန်မာပြည်မှာ ငွေတွေ မရှိဘူး.. ဘယ်ရှိမလဲ.. အကုန် သူများနာမည်တွေနဲ့ သိမ်းထားတာ.. နိုင်ငံခြားမှာ ပို့ထားတာ.. အကျယ်ချုပ် ၇ နှစ် အကျခံလိုက်တာနဲ့ မီလီယံနာ ဖြစ်ပြီ...
ခင်ညွန့် က ဘယ် အပင်စိုက်စားမှာလဲ.. အလကား ပြောတာ.. ခင်ညွန့် စိုက်တာက ဘိန်းပင်တွေ.. ခင်ညွန့်က ၀တွေ ကိုးကန့်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ဘိန်းစိုက်နေခဲ့တာ လူတိုင်း သိတယ်..
မြန်မာပြည်မှာ အပ်ကျတာတောင် ထောက်လှန်းရေးက သိတယ်.. ရွှေတြိဂံက ထွက်တဲ့ ဘိန်းတွေ မြန်မာပြည်ထဲဖြတ်သွားတာ ဖမ်းဆီးတဲ့ သတင်း မကြားရသလောက် ဖြစ်နေတာက ခင်ညွန့်တို့လို ဗိုလ်ချုပ်တွေ ဘိန်းကုန်သည်တွေဆီက ဝေစု အကြီးစားတွေ ရှယ်ယာရပြီး အကြီးအကျယ် ပွနေကြလို့ပေါ့.. ဟုတ်ဘူးလား...
ဘိန်းကုန်သည်တွေက ဘိန်းရောင်းလို့ ရတဲ့ အမြတ်ထဲက ခင်ညွန့် ဝေစုတွေကို နိုင်ငံခြားက ဘဏ်တွေမှာ ခင်ညွန့်က သူများနာမည်တွေနဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ ဘဏ်စာရင်းတွေထဲ ထည့်ပေးတာလေ..
သန်းရွှေက နိုင်ငံခြားက ဘဏ်တွေမှာ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ဝ၀ ကျော် အပ်ထားတယ်.. ပြီးတော့ တရုတ်ပြည်မှာ ခြံဝင်းကျယ်ကြီးတွေနဲ့ နန်းတော်လို အိမ်ကြီးတွေ ဝယ်ထားသေးတယ်..
ခင်ညွန့်လဲ သန်းရွှေလို ဘီလျံနာ မဖြစ်ရင်သာ နေမယ်.. မီလျံနာကတော့ အသေအချာပဲ..
အခုလဲ ခင်ညွန့်က ခင်ရွှေဆီက တရားဝင်လခ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ရပြီ.. တရားမဝင် လာဘ်ငွေတွေလဲ ရဦးမှာပဲ.. ခင်ညွန့်ရဲ့ အဆက်အသွယ်တွေကြောင့် ရလာမယ့် လုပ်ကိုင်ခွင့် ပါမစ်တွေ၊ တခြား အခွင့်အရေးတွေကို ရဖို့ မျှော်ကိုးပြီး ခေတ်ပျက်သူဌေးတွေ၊ ဝိသမစီးပွားရေးသမားတွေက ခင်ညွန့်ကို "ကန်တော့" ကြဦးမှာပါ..
ဒီလိုပဲ ယူနီဖောင်းချွတ် အရပ်သား အရေခြုံ ဗိုလ်ချုပ်တွေရယ်၊ ယူနီဖောင်း ဝတ်ထားဆဲ ဗိုလ်ချုပ်တွေရယ်၊ ကြံဖွတ်တွေရယ်၊ ခေတ်ပျက်သူဌေးတွေရယ်၊ တခြား လက်ဝေခံတွေရယ်က ..... မြန်မာပြည်ကို ဆက်လက် မောင်ပိုင်စီးဦးမှာပဲ.. မြန်မာပြည်ရဲ့ တရားဝင် စီးပွားရေး၊ တရားမဝင် စီးပွားရေး .... က ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ဦးမှာပဲ..
စစ်အုပ်စု လုံးဝ အမြစ် မပြုတ်မချင်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ဒီလိုပဲ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်သူတွေကို မျက်လှည့်ပြပြီး၊ နားလှည့်ပါးရိုက်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာနေကြဦးမှာပါ.. ပြည်သူအများစုကလဲ မွဲမြဲ မွဲနေကြဦးမှာပါ..
ခင်ညွန့်ကုို ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေက ဘာကြောင့် လစာ တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ပေးသလဲ - ၁ says:
January 25, 2012 at 7:13 AM Reply
ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေက ခင်ညွန့်ကုို တလ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးထောင် (ကျပ်ငွေ သိန်း ၄၀ ကျော်) လစာပေးမယ်လုို့ ဆုိုတယ်။
ခင်ညွန့် ရမဲ့ လစာ တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ဆုိုတာ ဖိလစ်ပုိုင်သမ္မတ လစာထက် ၄ ဆ များပါတယ်။ ဗီယက်နမ်သမ္မတ လစာထက် အဆ ၂၀ များတယ်။ ထုိုင်းဝန်ကြီးချုပ် လစာထက် ၂ ဆနီးပါး များတယ်။ သဘောကတော့ ခင်ညွန့်ကုို သိက္ခာမကျအောင် အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ခင်ရွှေက ကြေးတန်းညှိပေးလုိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ညွန့်ကုို ခင်ရွှေက ပေးမဲ့လစာက သမ္မတသိန်းစိန် လစာထက် ဒေါ်လာ ၁၀ဝ၀ ဘဲ နည်းပီး ဒုသမ္မတ တင်အောင်မြင်ဦး လစာထက်လဲ များနေပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေဟာ ခင်ညွန့်ကုို လစာ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ပေးလုိုက်တဲ့အတွက် ခင်ညွန့်ဟာ နေ့ချင်းညချင်း ဒုသမ္မတ တင်အောင်မြင်ဦးထက် သာတဲ့ လစာ ပေးလုိုက်တာမုို့ နုိုင်ငံရေးအရပြောရင် တင်အောင်မြင်ဦးကုိုပါ ခင်ရွှေက နားရွက် တံတွေးဆွတ်လုိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆုို ခင်ရွှေ အနေနဲ့ ခင်ညွန့်ကုို နှစ်ပေါင်း ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဒေါ်လာတွေ ပေးမလဲ တွက်ကြည့်ရအောင်ပါ။
ခင်ညွန့်က ခု ၇၀ ကျော်နေပြီဆုိုတော့ နောက်ထပ် အများဆုံး အနှစ် ၂၀ အသက်ရှည်မယ်လုို့ မှန်းထားရင် ဇေကမ္ဘာက ခင်ညွန့်ကုို ပေးရမဲ့ နှစ် ၂၀ အတွက် လစာငွေ စုစုပေါင်းက ဒေါ်လာ ၁၂ သိန်း ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ခင်ညွန့်ဟာ နှစ် ၂၀ မတုိုင်ခင်လဲ သေနုိုင်ပါတယ်။
ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေက "ခင်ညွန့်ကုို မြရိပ်ညိုဖောင်ဒေးရှင်း နာယကအဖြစ် ခန့်လုိုက်တယ်" ဆုိုရင် ပြီးရက်သားနဲ့ ဘာလုို့ လစာကုို တမင် ဖော်ပြရသလဲဆုိုတာ မေးစရာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ခင်ညွန့်ကုို မြရိပ်ညိုဖောင်ဒေးရှင်း နာယက ခန့်တဲ့နောက်မှာ ခင်ရွှေရဲ့ နုိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေ အများကြီးပါနေတာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ညွန့်ကုို ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေက ဘာကြောင့် လစာ တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ပေးသလဲ - ၂ says:
January 25, 2012 at 7:14 AM Reply
ခင်ညွှန့်ကုို ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေက လစာ တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ပေးတယ်လုို့ လူသိရှင်ကြား ပြောလုိုက်တဲ့အတွက် --
- ခင်ရွှေ စီးပွားရေးလုပ်ပုိုင်ခွင့်တွေ အမျိုးမျိုး ရအောင် ခင်ညွှန့်က အခွင့်အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ဘယ်လောက် ကူညီ မစခဲ့သလဲ ဆုိုတာ ပေါ်လွင်တယ်။
- ခင်ညွန့်အတွက် အနှစ် ၂၀ စာ ဒေါ်လာ ၁၂ သိန်း ဆုိုတဲ့ များပြားတဲ့ ငွေပမာဏကုို မုန့်ဘုိုးပေးသလုို " ရော့ ... အင့် ..." လုို့ ပေးနုိုင်တာကုို ကြည့်ရင် ခင်ရွှေက သူ ဘယ်လောက် ချမ်းသာနေလဲ ဆုိုတာကုို ပြည်သူတွေ လန့်သွားအောင် ခြိမ်းခြောက်ပြလုိုက်တာလဲ ပါ ပါတယ်။
- ခင်ညွှန့် လစာကုို ဒုသမ္မတ တင်အောင်မြင်ဦးထက် ပုိုပေးလုိုက်တဲ့အတွက် တင်အောင်မြင်ဦး အပေါ် ခင်ရွှေက ထိပ်ကွက်လုိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တင်အောင်မြင်ဦးဘက်က ဘယ်လုို တုံ့ပြန်မလဲ ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။
- ခင်ညွှန့်ကုို တလ ဒေါ်လာ ၆၀ဝ၀ ပေးရင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တန်းတူဖြစ်သွားမှာ စိုးတဲ့အတွက် သိန်းစိန် မငြိုငြင်အောင် ဒေါ်လာတထောင် လျှော့ပီး ခင်ညွန့်ကုို ပေးတာ ဖြစ်နုိုင်ပါတယ်-
- တချိန်က ထောက်လှမ်းရေးအကြိးအကဲ ခင်ညွန့်ကုို တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ပေးတဲ့အတွက် လက်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်တွေ ခင်ညွန့်ကုို မနာလုိုဖြစ်အောင် ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေက ဖန်တီးသလုို ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ဂုိုဏ်းဂဏတွေ ပုိုများလာနုိုင်တယ်။ အာဃာတတွေ ပုိုများလာမယ်။
ခင်ရွှေ သမီးရဲ့ ဂျာနယ်မှာ ဒေါ်စု အမှား လုပ်မှသာ မျက်နှာဖုံးမှာ ဖော်ပြဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ် says:
January 25, 2012 at 7:36 AM Reply
ခင်ညွန့်က "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံပါတယ်" ဆိုပဲ..
အလကား လျှာရိုးမရှိတိုင်း လျှောက်ပြောနေတာ..
ခင်ညွန့် ကို တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ လခ ပေးမယ် ဆိုတဲ့ ခင်ညွန့်ရဲ့ အမာခံ ခင်ရွှေ သမီးရဲ့ ဂျာနယ်မှာ ဒေါ်စု အမှား လုပ်မှသာ မျက်နှာဖုံးမှာ ဖော်ပြဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်..
ဦးခင်ရွှေ သမီး ထုတ်ဝေသော Street View ဂျာနယ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ကောင်းသတင်းကို မျက်နှာဖုံး မတင်ရန် ၊ NLD နှင့် ဒေါ်စု အမှား ပြုလုပ်မှသာ မျက်နှာဖုံးတွင် ဖော်ပြရန် အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကို ညွှန်ကြားထားကြောင်း ......... ၄င်း
ဂျာနယ် မှ အလုပ်ထွက်လာသော (နာမည်ကြီး ကလောင်) အယ်ဒီတာ တစ်ဦးက
လက်ရှိ အယ်ဒီတာများမှာ ဆရာညို နှင့် နွယ်ဂျာသိုင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဂုဏ်သရေ မရှိတဲ့ ခင်ညွန့် ဈေးတက်အောင် ဂုဏ်သရေ မရှိတဲ့ ခင်ရွှေက ကြမ်းခင်းဈေး ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ နဲ့ ဈေးခေါ်လုိုက်တာပါ says:
January 27, 2012 at 8:31 AM Reply
နာယက ဆုိုတာ ရုံးတက်စရာတောင် မလုိုပါ။ ဘာမှလဲ လုပ်စရာ မလုိုပါ။
အနောက်နုိုင်ငံတွေမှာတော့ ဂုဏ်သရေရှိ နုိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ အငြိမ်းစားယူရင် သူတုို့ရဲ့ အရည်အချင်း သူတုို့ရဲ့ နိုင်ငံတကာအဆက်အသွယ်၊ ပြည်တွင်းအဆက်အသွယ်၊ အစိုးရပုိုင်းဝင်ဆံ့မှု စတဲ့ အရည်အသွေးတွေကြောင့် နာယက ခန့်ကြတာပါ။
ဂုဏ်သရေ မရှိတဲ့ ခင်ညွန့်လုို လူမျိုးကုို နာယက ခန့်တာတော့ မတွေ့ဘူးပါ။ ဒါပေမဲ့ ခင်ညွန့်လစာကတော့ အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်တွေထက်တောင် သာနေပါတယ်။ ပေးသူ ခင်ရွှေကလဲ ဂုဏ်သရေ မရှိသူပါ။
ဒါတောင် ရွှေတွေ ပိသာလုိုက် ခုိုးထားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးပြုတ်တွေက ဆရာဖြစ်တဲ့ ခင်ညွန့်ကုို လာပူဇော်တာ မပါသေး။
အမှန်ကတော့ ခင်ရွှေကနေ ခင်ညွန့်ကုို ဈေးတက်အောင် ကြမ်းခင်းဈေး ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ နဲ့ ဈေးခေါ်လုိုက်တာပါ။ ခင်ညွန့်ကုို ခင်ရွှေက ပလ္လင် တည်ပေးနေတာပါ။
မကြာခင် ခင်ညွန့်ကုို အကျိုးမျှော်ပြီး ညောင်ရေလောင်းမယ့် စေတနာရှင်တွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ခင်ညွန့်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တပ်ထဲမှာ အတော်လေး မကျေမနပ် ဖြစ်နေတယ်လုို့ ပြောနေကြတယ်။
စစ်အုပ်စု နဲ့ ပုလင်းတူဘူးဆို့ ခေတ်ပျက်သူဌေး ခင်ရွှေက ရာဇဝတ်ကောင် ခင်ညွန့်ကို လခ တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ပေးခြင်း အပေါ် ပြည်သူများ၏ သုံးသပ်ချက်များ (၁) says:
January 27, 2012 at 10:05 AM Reply
Myan Mar - ဇေကမ္ဘာ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ခင်ညွန်.ပိုက်ဆံတွေ ပါမယ် ထင်တယ် ..
စီးပွါးရေးအရ ဆက်နွယ်မှု. အကြီးကြီး ရှိနိုင်တယ် ....
Naing Aung - Maybe Khin Nyunt is withdrawing his black money, transforming into legitimate way from Zay Gabar Khin Shwe.
Ko Naung - သူ့ ၇ဲ့ ကံတူအကျိူးပေးပေါ့ 
Lu Gyi - ဦးခင်ညွှန့်ကို ဘောင်ထဲ ပြန်ဆွဲသွင်းလာတာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား
Area X Area - ခင်ရွှေက ခင်ညွန့် တပည့်ပါ။ ခင်ရွှေက ခင်ညွန့်ရဲ့ ခြေနဲ့ လက်ပါ။
Komagitaln Magitaln - ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစား မရှိပဲနဲ့တော့ လုံးဝ မဖြစ်နိူင်ဘူး။ give and take အပေးအယူ ရှိတာ သေချာတယ်။
han Htun - သေဖေါ်ညှိတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Jock Jamo - ခင်ရွှေက သိန်းစိန်ထက် ဩဇာအာဏာ ကြီးသွားပြီပေါ့.. တင်အောင်မြင့်ဦး သနားတယ်ပေါ့..
တွေ့သလားတော့ မသိဘူး နော်.. ဒီမှာ ငွေ ဟိုမှာ ဥပဒေ..
တွေ့ပလား.. ငွေရဲ့ အောက်မှာ ဥပဒေ.. ဟိုးအပေါ်မှာ ခင်ရွှေ.. ဒီအောက်မှာ သိန်းစိန်..
စစ်အုပ်စု နဲ့ ပုလင်းတူဘူးဆို့ ခေတ်ပျက်သူဌေး ခင်ရွှေက ရာဇဝတ်ကောင် ခင်ညွန့်ကို လခ တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ပေးခြင်း အပေါ် ပြည်သူများ၏ သုံးသပ်ချက်များ (၂) says:
January 27, 2012 at 10:06 AM Reply
Lwan Thu - ဦးခင်ညွှန့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် မကျခင် စည်းစိမ်တချို့ ဦးခင်ရွှေဆီ အပ်ထားတာ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဦးခင်ညွှန့် ပြန်ထွက်လာတာနဲ့ ဦးခင်ရွှေက ပြန်ပေးတဲ့သဘောပေါ့။
Yan Lin Shein - Lwan Thu ဆိုတဲ့ တစ်ယောက် ပေးထားတဲ့ ကွန့်မန့်က အနီးစပ်ဆုံးပဲ... အဲ့ဒါပဲ ဖြစ်မှာပါ..
ခင်ရွှေ အဲ့သလောက် စေတနာ မကောင်းသလို.. အဲ့သလောက် မချမ်းသာလောက်ပါဘူး...
သူတို့ တွဲခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းမှ မနည်းတာ...
ခင်ညွန့်က လည်တယ်.. ဒါကြောင့် ကြိုတင် စီမံထားတာတွေ.. ဖြစ်နိုင်တယ်..
ခင်ညွန့် ပစ္စည်း ခင်ညွန့်ကို ပြန်ပေးတဲ့ သဘောမျိူးပဲ ဖြစ်မှာပဲ...
Koekoe Mg - ကျေးဇူးစား ကျေးဇူးခံတွေပါဗျ
Ei Khine - ခင်ညွန့် လာဘ်စားမှုနဲ့ အဖြုတ်ခံရတုန်းက ပစ္စည်းတွေပါ အသိမ်းခံရမှာစိုးလို့ ခင်ရွှေကို အပ်ခဲ့တာ..
ခုမှ ခင်ရွှေ ပေးသရောင်ရောင် ပြန်လုပ်တာ နေမှာ...
အရင် သူတို့ခေတ်တုန်းက အတူတူ ထင်တိုင်း ကြဲခဲ့တာတွေပေါ့...
Sept Thway - "ဟေ ........ လောကကြီး ..." လို့ပဲ အော်လိုက်ချင်တော့တယ် .......
Koko John - လူမုန်းများတဲ့သူ အသက်ရှည်၏
Nway Lay Pyay - ပိုက်ဆံတွေ အဲဒီလောက် ပေါနေရင် လှူလိုက်ပေါ့ကွယ် ... ခြိမ်းခြောက်ပြစရာ မလိုပါဘူး ...
အရင်တုန်းက ခင်ရွှေကို ဒေါက်တာဘွဲ့ရ စီးပွားရေးပညာရှင် ဆိုပြီး တော်တော် အထင်ကြီးခဲ့မိတာ ...
စစ်အုပ်စု နဲ့ ပုလင်းတူဘူးဆို့ ခေတ်ပျက်သူဌေး ခင်ရွှေက ရာဇဝတ်ကောင် ခင်ညွန့်ကို လခ တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ပေးခြင်း အပေါ် ပြည်သူများ၏ သုံးသပ်ချက်များ (၃) says:
Tin Aung Hla - ဖတ်ဖူးတာက ခင်ရွှေက ၁၉၉၀ ဝန်းကျင်ကတည်းက ဗမာပြည်မှာ ပထမဦးဆုံး ပုဂ္ဂလိက ပြည်သူတဦး အနေဖြင့် ဒေါ်လာ ၁ သန်း တရားဝင် ချမ်းသာသူ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာမဂ္ဂဇင်း တခုမှာ ပါဖူးတယ်ဗျ။ ဒီတုန်းက တေဇ တို့ မပေါ်သေးဘူး ထင်တယ်။ ခုတော့ ခင်ရွှေက သူ့ကို ပိုချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးတဲ့ သူ့ဆရာ ခင်ညွန့်ကို ကျေးဇူး ပြန်ဆပ်တယ်ပေါ့ဗျ။ အဲဒီလို ထင်ရတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ခင်ရွှေ လုပ်ပုံက "ငါဘယ်ကောင်လဲ" ဆိုပြီ high profile နဲ့ လုပ်ပြလိုက်တာ ဖြစ်တယ်။
Phyo Wai - ဘယ်သူက ဘယ်လောက်ပေးပေး ခင်ညွန့်ဟာ ဒီလစာငွေနဲ့ တန်အောင် လုပ်နိုင်သလား ကြည့်ရမှာပေါ့...
ခင်ညွန့်က ဘာတွေ လုပ်နိုင်လို့ ဒီလောက် ပေးတာလဲ....
ခင်ညွန့်ရဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ ခင်ညွန့်ကို ပြန်ပေးတာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား........
Phyo Wai - မဟုတ်တာ လုပ်တဲ့ သူအချင်းချင်း မဟုတ်တာ လုပ်ကြတာ မထူးဆန်းပါဘူးကွာ
Thein Zaw - ခင်ညွန့်တို့ ထီပေါက်ပြီ။ အလုပ်လက်မဲ့က အလုပ်ရသွားပြီ =-=+x ဟဟ။
Akphy Omml - တခြား အလုပ်လက်မဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလည်း အဲလို ပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိပါတယ်။ အဲဒါမှ လူကြီးလူကောင်း ပီသမှာပေါ့။
HninnMya Wai - yes, it seems both are wicked businessmen. not only politics. they really hate their country.
တစ်ကိုယ်တော် ရေးတဲ့ အေဘီစီဒီ - money makes everything. (ငွေရှိလျှင် ပါတီထောင်နိုင်သည်)
Ashin Ariya Vamsa - ဘယ်လိုပဲ ပြောကြပါစေ။ ခင်ညွန့် နိုင်ငံရေးလောကထဲ ပြန်မ၀င်ရင် ပြီးတာပဲ။ ဒီလိုပဲ ဆုတောင်းကြတာပေါ့။
Ye Lin Tun - လုပ်ထားပေါ့.. ခင်ရွှေ... မောင်ဝိတ် ပြီးရင် မင်းအလှည့်ဘဲ..
San Dar - အင်း ... ကြားရ နားဝမှာ မသက်သာပါလားနော်....
စစ်အုပ်စု နဲ့ ပုလင်းတူဘူးဆို့ ခေတ်ပျက်သူဌေး ခင်ရွှေက ရာဇဝတ်ကောင် ခင်ညွန့်ကို လခ တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ပေးခြင်း အပေါ် ပြည်သူများ၏ သုံးသပ်ချက်များ (၄) says:
Ka Yin Lay - ဒို့ များ ဗုဒ္ဒဘာသာနိူင်ငံမှာ ဘုန်းကြီးတွေကို သတ်တဲ့သူကို လစာ ကောင်းကောင်းပေးပြီး ဂုဏ်ပြုချင်နေကြတဲ့ ငမိုက်သားတွေလဲ ရှိနေသေးတာကိုး။
နောက်ထပ် ဘုန်းကြီးတွေကို သေစေချင်နေလို့ လား မသိပါဘူး။
ဒီတခါ ဆိုရင်တော့ ဟင်းဟင်းဟင်းဟင်း........... ဒီလောက်ပဲ ကျိန်းတော့မယ်။
Ka Yin Lay - ရှေးရှေးက တို့ ဘိုးဘွား ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေများ ဘာသာ၊ သာသနာနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် အသက်စည်းစိမ်တွေတောင် ပဓာနမထားဘဲ စွန့်လွှတ်ဝံ့ကြတယ်။ အခုခေတ်ကာလ သားသမီးတွေများ ဘုန်းကြီးသတ်တဲ့ လူဘက်ကတောင် ထောက်ခံလိုက်သေးတယ်။
ခေတ်သစ်ခင်ညွှန့် တော့ မလုပ်ကြပါနဲ့ ။
Thatoe Thuzaraung - ခင်ညွှန့်ကုို ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေက လစာ တလ ဒေါ်လာ ၅ ထောင်ပေးတယ်လုို့ လူသိရှင်ကြား ပြောလုိုက်တဲ့အတွက်-
-ခင်ရွှေ စီးပွားရေးလုပ်ပုိုင်ခွင့်တွေ အမျိုးမျိုးရအောင် ခင်ညွှန့်က အခွင့်အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ဘယ်လောက် ကူညီမစခဲ့သလဲ ဆုိုတာ ပေါ်လွင်တယ်။
Lai Tun - OH MY GOD!!!!!!!!.....
စစ်အုပ်စု နဲ့ ပုလင်းတူဘူးဆို့ ခေတ်ပျက်သူဌေး ခင်ရွှေက ရာဇဝတ်ကောင် ခင်ညွန့်ကို လခ တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ပေးခြင်း အပေါ် ပြည်သူများ၏ သုံးသပ်ချက်များ (၅) says:
January 27, 2012 at 10:08 AM Reply
Mg Bhakhat - ခင်ရွှေ စီးပွားရေးလုပ်ပုိုင်ခွင့်တွေ အမျိုးမျိုး ရအောင် ခင်ညွှန့်က အခွင့်အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ဘယ်လောက် ကူညီ မစခဲ့သလဲဆုိုတာ ပေါ်လွင်တယ်။
Kanbawza Thar - ခင်ညွန့် တို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အတိတ်တုန်းက ပြုမူ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် အခုချိန်မှာ ခင်ညွန့် တို့ဟာ သူတော်ကောင်းလား၊ သူယုတ်မာလား ဆိုတာကို သူတို့ကိုယ်တိုင် တံဆိပ် ကပ်ထားပြီးသားပါ။
ဒါကိုမှ ခင်ညွန့် တို့ ပြုမူ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ဘုရားဟောတရားနဲ့ ညီပြီး ကောင်းတာတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ "သူတော်ကောင်းတွေ" လို့ ထင်ရင်လည်း သဘောပါဗျာ။
ခင်ညွန့် ရတာ၊ မရတာကို မုဒိတာ မပွားတာ မဟုတ်ဘူးနော်၊ အသိလေးတွေ နှိုးပေးတာပါ။ အိပ်နေတဲ့ သူတွေ၊ မျက်ကန်းတွေ ရှိနေလို့ပါ။
Marko Polo - သူတို့ များတော့ .....သိန်း ၄၀ တဲ့ ...... လောကကြီးက.. ဘက်လိုက်... လိုက်တာ.....
မရှိတဲ့ သူတွေများ... တစ်လ.....၅ သောင်း ရဖို့ တောင်.....မနဲ.... နာယက ဆိုတော့ ... အိပ်လိုက်စားလိုက်ပေါ့ .....
ဒီမှာတော့ .. နဖူးကချွေးခြေမ ကျတာတောင်...... မရချင်ဘူး.... ဟွန့်
Wai Lu - လူသေရင် ကုတို့ခ တမတ် ထဲ့ပေးရတယ်လေ။ ဒေါ်လာခေတ် ဆိုတော့ ဒေါ်လာ ထည့်ပေးတာ နေမှာပေါ့။
Aye Aye Mun - Back to the square one. Next step will be his corruption.
စစ်အုပ်စု နဲ့ ပုလင်းတူဘူးဆို့ ခေတ်ပျက်သူဌေး ခင်ရွှေက ရာဇဝတ်ကောင် ခင်ညွန့်ကို လခ တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ပေးခြင်း အပေါ် ပြည်သူများ၏ သုံးသပ်ချက်များ (၆) says:
January 27, 2012 at 10:10 AM Reply
Nyein Chan - တစ်လ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ပေးနိုင်တာ သမာအာဇီဝနဲ့ စီးပွားရှာထားတာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
Ashin Kawwida - "သူတော်ချင်းချင်း သတင်းလွေ့ လွေ့ ၊ ပေါင်းဖက်တွေ့" ဆိုတာ သူတို့ ပေါ့။
ဗိုလ်ခင်ညွန့် ကလည်း သူ အာဏာရှိစဉ်က အစွမ်းကုန် ရက်စက်ခဲ့တဲ့သူ၊
ဦးခင်ရွှေ ဆိုသူကလဲ အစွမ်းကုန် အကျင့်ပျက် စီးပွားရေးသမား.. ပေါင်းမိကြမှာပေ့ါ.......
Darli Pug ‎-2Pigs start again to kill the people and to play with country's natural resources. :(
ကို လတ် - ♥ခင်ညွန့် တို့ စပီ..... သူတို့ အလုပ်. လုပ်တော့မယ်....♥
Sansan Ohn - i think, this is bad news.
Win Thein - စိတ်မချမ်းသာလိုက်တာ ခင်ရွှေရယ် .....
အဲ့လောက် ချမ်းသာနေရင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် တွေကို လှူလိုက်ရင်တော့ ......
အင်း............ခင်..က... ခင်..ကို ပေးတာ ....စိတ်မကောင်းလိုက်တာ
BoBo Aung - ဘာမှမလုပ်ရတဲ့.. နာယက နေရာမှာ ထိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ကို $5000 ပေးတာတော့ များလွန်လွန်းတယ် ထင်တယ်ဗျာ...
အောက်ခြေလူတန်းစားတွေ ဘက်လည်း လှည့်ကြည့်စေချင်တယ်.. ။
Win Htay - ဦးခင်ညွှန့်မှာ နိုင်ငံရေးထဲ ဝင်ဖို့ ဒီတကွက်ဘဲ ရှိတယ်
Thein Htun Oo ဒီမိုကရေစီ မှာ လက်ဝါးကြီးအုပ် မိုနိုပိုလီ ကိုဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်တယ်။
အခုလက်ရှိ အမေရိကားမှာ "ဝေါလ်စထရိ ကိုသိမ်းပိုက်ကြ" ဆိုပြီး လှုပ်ရှားနေတာ ဘာကြောင့်လဲ။။။။။။။။။။။။။။
စီးပွားရေးနှင့် မီဒီယာတွေကို လက်ဝါးကြီး အုပ်ပြီး ချယ်လှယ်နေကြတာကို ဆန့်ကျင်တာပဲ ဖြစ်တယ်။
ပြည်သူတွေအတွက် နောက်ရင်ဆိုင်ရမဲ့ ပွဲက လက်ဝါးကြီးအုပ် ဆန့်ကျင်ရေးဘဲ ။။ အားမွေးထားကြတော့......
စစ်အုပ်စု နဲ့ ပုလင်းတူဘူးဆို့ ခေတ်ပျက်သူဌေး ခင်ရွှေက ရာဇဝတ်ကောင် ခင်ညွန့်ကို လခ တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ပေးခြင်း အပေါ် ပြည်သူများ၏ သုံးသပ်ချက်များ (၇) says:
January 27, 2012 at 10:11 AM Reply
Minko Min - ဒေါက်တာ တု ခင်ရွှေ ..ပြဇာတ်တစ်ခု ကဘို့ ဇာတ်လမ်း ထွင်နေပြီ... သတိတော့ ထားရမယ်ဗျို့...
ဒီလူက ကိုယ့်အကျိုး မရှိရင် သူ့မိန်းမအတွက် သနပ်ခါးတုံးတောင် ၀ယ်ပေးတက်တဲ့ သူမဟုတ်ဘူး...
အကျိုးမျှော် ဇာတ်လမ်း ဆင်တာတော့ ကြိမ်းသေတယ်...
ကိုယ့်အကျိုး ကိုယ်ကြည့်ပြီး.. မရှိဆင်းရဲသားတွေကို နင်းတက်တဲ့ လူကြီး.. လူ့အတ္တကြီး....
ခင်ရွှေ နဲ့ ခင်ညွန့် လူမိုက်နှစ်ယောက် ပေါင်းမိရင်တော့ မြန်မာပြည်အရေး ရင်လေးစရာကြီး....
Kyaw Htike - သူတို့ တွေ ဘာလုပ်လုပ် ပြည်သူတွေအတွက် ရင်နင့် စရာကြီးပါပဲ...
ရေးထားလို့ သာ ဖတ်ရတယ်.. ဖတ်ချင်တာ မဟုတ်ဘူး..
ဖတ်ပြီးတော့ လဲ ရင်ထဲ မကေါင်းတာ အဖတ်တင်တယ်...
Zawone Lay - "ခင်ရွှေ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ" ဆိုတာ ရှင်းနေတာပဲ၊
အရင် ခင်ရွှေ ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ သာသနာအဖွဲ့တစ်ခု အတွက်ကျတော့ ရုံးခန်းဖွင့်တာတောင် ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေ ချွေးနဲစာနဲ့ ဆောက်ထားတဲ့ ဆရာစံ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ဓမ္မါရုံကြီးကို အပိုင်စီးဖို့ ကြိုးစားခဲ့လို့ ရပ်ကွက်က မောင်းထုတ်ခဲ့ရဖူးတာ မှတ်မိကြအုံးမှာပါ၊
ဒီလို ဘာသာရေးအတွက် လုပ်တာတောင် အခန်းတစ်ခန်း ငှါးဖို့ စေတနာမရှိတဲ့ ကောင်က ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ရာထူးတစ်ခုအတွက် ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ပေးတယ် ဆိုတော့....
အင်း ဘယ်လို စေတနာတွေပါလိမ့်.???
Phyuhnin Aung - ဘာလို့ မျှော်လင့်ရမှာလဲ လူတိုင်းကို ဒုက္ခပေးပြီးမှ ကိုယ်ပြုတဲ့ ကံအတိုင်း ပြန်လာမှာဘဲ
Than Zaw - တရားအားထုတ်တော့မှာဆို?
စစ်အုပ်စု နဲ့ ပုလင်းတူဘူးဆို့ ခေတ်ပျက်သူဌေး ခင်ရွှေက ရာဇဝတ်ကောင် ခင်ညွန့်ကို လခ တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ပေးခြင်း အပေါ် ပြည်သူများ၏ သုံးသပ်ချက်များ (၈) says:
January 27, 2012 at 10:12 AM Reply
Poehat Phyu - ဦးခင်ညွန့်အတွက်တော့ ၀မ်းသာစရာပဲပေါ့။ ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲ ကျတာပဲ။
အားလုံးအတွက် မုဒိတာ ပွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မကောင်းမှုကို ခံစားရတာက သပ်သပ်ပဲ။
ပြည်သူတွေအတွက်တော့ ဒီသတင်းက ရင်လေးစရာပါ။
ဦးခင်ရွှေက ငွေရှိတယ်၊ ဦးခင်ညွန့်က တစ်ချိန်က အာဏာနဲ့ တပည့်တပန်းတွေ ရှိတယ်။
ဦးခင်ညွန့်က သူ့ခေတ် ပြန်မထူထောင်နိုင်ဘူး လို့ ဘယ်သူ ပြောနိုင်မလဲ။
Ko Mg - black money to blacklist man.
Kophyo Ko Phyo - အကျဉ်းထောင်တွင်း ဆရာတော်ကြီးများနှင့် သံဃာတော်များ သီတင်းသုံးရပုံ
စစ်အုပ်စု နဲ့ ပုလင်းတူဘူးဆို့ ခေတ်ပျက်သူဌေး ခင်ရွှေက ရာဇဝတ်ကောင် ခင်ညွန့်ကို လခ တလ ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ ပေးခြင်း အပေါ် ပြည်သူများ၏ သုံးသပ်ချက်များ (၉) says:
January 27, 2012 at 10:13 AM Reply
Nan Myint Myint Kyi - နောက်ကွယ်မှာ နိုင်ငံရေးရွှေ့ကွက်တွေ ဘာတွေတော့ နားမလည်ဘူးးး ... အသေးစိတ် မသိနိုင်ဘူးးး ...
သေချာတာကတော့ ကိုင်းကျွန်းမှီ၊ ကျွန်းကိုင်းမှီ၊ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ဦးနှောက်ဖောက်စားမှာပါပဲ ....
Min Thusoe - မြင်းကို ချိုတတ်ပေးလိုက်တာတော့ မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်နော်
Shwe Yi Linn - ငါသာဆို မရှိဆင်းရဲသားတွေက်ိုပဲ လှုလိုက်မယ်..
Kyaw Zaya - ခင်ညွန့်ဖက်က ရှေ့နေလိုက်ပေးနေတဲ့ Aye Eaint ဆိုတဲ့သူသို့ .....
မြန်မာလူငယ်တွေ အစွမ်းအစ မရှိရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းက စစ်အုပ်စုက လူငယ်တွေ ပုံ မလာအောင်၊ အညွန့်တုံးအောင် လုပ်ထားတာကို ကျတော့ရော ဘာမှ မပြောတော့ဘူးလား..
မြန်မာလူငယ်တွေ အသုံးမကျအောင်၊ ဘ၀ကို ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မရှိအောင် စစ်အုပ်စုက အကုန် ပိတ်ပင်ထားတာကို မပြောဘဲ ရှေ့နေလိုက်ပေးနေတယ်...
နင့်ဝင်ငွေရော ဘယ်လောက်ရှိသလဲ.. Aye Eaint ဆိုတဲ့သူ....
မြန်မာပြည်မှာ ငါ တစ်လ တစ်သိန်း ရတယ်.. ဘာလုပ်သလဲ မမေးနဲ့.. တစ်နေ့ကို ထမင်းဖိုးတင် 3000 ကုန်တယ်...
မလောက်တော့ ခိုးရမှာလား၊ လိမ်ရမှာလား၊ လု ရမှာလား..
လူတန်းစေ့ ဆိုတဲ့စကား.. ဘယ်မှာ သွာံးကြည့်ရမှာလဲ..
လက်တစ်ဆုပ်လောက် အဆင်ပြေနေတာကို မကြည့်နဲ့လေ ...
တစ်နိုင်ငံလုံး ဘာတွေ ဘယ်လို ဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာ မျက်စေ့ကို ပြူးနေအောင် ကြည့်...
ဘာမှ မလုပ်ကြတာထက် စာရင် ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေက အလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်.. ငတိမ ရေ..............
ကလိမ်ကကျစ် ခင်ညွန့်က မြို့မေတ္တာခံယူရန် ကြိုတင် အကွက်ချကာ တမင် ထောင်အကျခံပြသည့် လုပ်ဇာတ်ဖြင့် ပြည်သူနှင့် နိုင်ငံတကာကို မျက်လှည့်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုသည့် အယူအဆ (၁) says:
January 27, 2012 at 1:33 PM Reply
လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ နေ၀င်းမြေး ၊ ခင်ညွန့်တို့ဟာ ဗမာပြည်သူတွေရဲ့ မြို့မေတ္တာ ခံယူနေကြခြင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်ကတဲက ခင်ညွန့်က ဦးဆောင်ဦးရွက် ပြုပြီး န၀တ စစ်အုပ်စု တစ်ခုလုံး စနစ်တကျ ကြိုတင် အကွက်ချ ဖန်တီး ပြင်ဆင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီအကွက်တွေကို လုံးဝ လက်မခံတဲ့ အတွင်းရေးမှူး (၂) ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦးကို အသေသတ်ခဲ့ပါတယ် ။ တင်ဦး သေတာနဲ့ တပြိုင်နက် နေ၀င်းမြေးတွေကို ထောင်ချ ၊ ခင်ညွန့်က ဟန်ပြ အပြင်မှာ ခဏနေပြ ၊ အားလုံး အစီအစဉ်တွေ အသင့်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် ခင်ညွန့်က သူကိုယ်တိုင် ထောင်ထဲဝင်ပြ ၊ ဗမာ့နိုင်ငံရေး ဗမာပြည်သူ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းဝိုင်း အားလုံးကို မျက်လှည့်ပြ ၊ အားလုံးပြီးသည့်နောက် အခုလို ကိုမင်းကိုနိုင် နဲ့ ခင်ညွန့် ကို ယှဉ်တွဲပြီး လွှတ်ပြ ၊ ခင်ညွန့် ၊ နေ၀င်းမြေးတို့ကို ပြည်သူတွေရှေ့မှောက် သေသေသပ်သပ်နဲ့ ပွဲထုတ်ပြလိုက်တဲ့ လုပ်ကွက်က အရမ်း ပိရိ သေသပ်လွန်းတော့ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ ဒီလုပ်ကွက်ရဲ့ မြစ်ဖျားခံရာကို မသိရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့ ။
ဒီဖြစ်စဉ် ၊ ဒီရွှေ့ကွက်တွေ အားလုံးကို စနစ်တကျ ရေးသားဖော်ထုတ် တင်ပြသွားပါမယ် ။ ဘာကြောင့် နေ၀င်းမြေး ၊ ခင်ညွန့် ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကို တပြိုင်နက် လွှတ်ပေးလိုက်ရသလဲ ဆိုတဲ့ နောက်ကွယ်မှာ တိကျခိုင်မာတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ရှိတယ် ။
စစ်တုရင်ကစားနည်းမှာ ဘုရင်မကြီးတစ်ကောင် ပစ်စလက်ခတ် ချကျွေးပြီး နောက်ထပ် ဘုရင်မတွေ ၊ ရထားတွေ ၊ မြင်းတွေ အစီအစဉ်ကျကျ သေသေသပ်သပ် ပြန်ယူသွားတဲ့ အဆင့်အမြင့်ဆုံး ကစားကွက် ဖြစ်ပါတယ် ။
ကလိမ်ကကျစ် ခင်ညွန့်က မြို့မေတ္တာခံယူရန် ကြိုတင် အကွက်ချကာ တမင် ထောင်အကျခံပြသည့် လုပ်ဇာတ်ဖြင့် ပြည်သူနှင့် နိုင်ငံတကာကို မျက်လှည့်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုသည့် အယူအဆ (၂) says:
January 27, 2012 at 1:34 PM Reply
ဘယ်ကစလဲ ဆိုတော့ အတွင်းရေးမှူး (၂) ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦး သေတယ် ၊ အတွင်းရေးမှူး (၁) ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် က သတ်တယ် ။
အဲဒီ အချိန်က အစပြုပြီး ယခု လက်ရှိ ၊ ယနေ့အချိန်အထိ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှ ဗမာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းအားလုံးကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု စနစ်တကျ စေ့စေ့စပ်စပ် လေ့လာ သုံးသပ်ခဲ့သူဆိုလျှင် ခင်ညွန့် ရွှေ့ခဲ့သော အကွက်ကို မြင်နိုင်ပါတယ် ။
န၀တ စစ်အုပ်စု တစ်ခုလုံး အတွက် မြွေမသေ တုတ်မကျိုး ကမ္ဘာ့အလယ် မြန်မာ့အလယ်မှာ ၀င့်ထည်စွာ ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကို ဗမာပြည်သူတွေသာမက ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းအားလုံးကို လှပသေသပ်စွာ ပြသသွားတဲ့ အဆင့်မြင့်ဆုံးသော မျက်လှည့်ပြကွက်ဆန်း ဖြစ်ပါကြောင်း ဒီနေရာက နေပြီး လေးနက်စွာ တင်ပြအပ်ပါတယ် ။
အခုလို ခင်ညွန့် မလွတ်မြောက်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်ပိုင်းလောက်က ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ တင်လိုက်တဲ့ ခင်ညွန့်ကို နေအိမ်မှ လာခေါ်သွားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ကို လူတော်တော်များများ သိလိုက်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
အဲဒီ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ဘာ့ကြောင့် ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဘယ်သူက တင်လိုက်ပါသလဲ ။ အဲဒီနောက် နေ၀င်းမြေး ၊ ခင်ညွန့်တို့နဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကို အတူယှဉ်တွဲပြီး ဘာကြောင့် လွှတ်လိုက်ပါသလဲ ။ အဲဒီ ဖြစ်ရပ် နှစ်ခုကို ဆက်စပ်ပြီး ကြည့်ပါ ။ သေချာကြည့်လေ ၊ မြင်လေ ။ အထူးမြင်အောင်ကြည့်လေ ၊ ပို၍ ထင်ရှားလေလေ ပါဘဲ ။
၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးအတွင်း ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူ အပေါင်းတို့ရဲ့ ဘ၀ပေါင်းများစွာ ၊ အသက်ပေါင်းများစွာကို ရက်စက်စွာ နင်းချေဖျက်ဆီး သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အဓိက စစ်ရာဇ၀တ်ကောင် တရားခံ အစစ်ဟာ ခင်ညွန့် နဲ့ သူ့အပေါင်းပါ နောက်လိုက် ထောက်လှမ်းရေးတပ်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ခင်ညွန့်ဟာ ကလိမ်ကကျစ် ဥာဏ် အထက်မြက်ဆုံး ဖြစ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်သည့်အတွက် သူ့ လုပ်ရပ် ၊ သူ့အပြစ်တွေကို အများသူငါ မသိနိုင်စေရန် အလို့ငှါ သူ့ထောက်လှမ်းရေးတပ်ကြီးကို ၂၀၀၄ မှာ လုံးဝ အပျောက်ရိုက်အကွက်နဲ့ သူကိုယ်တိုင် ထောင်ကျခံပြလိုက်ပါတယ် ။ ထောင်ထဲမှာ ၇ နှစ်လောက် သွားနေပြလိုက်ပြီး ဗမာပြည်သူလူထုကြီးနှင့် နိုင်ငံတကာကို မျက်လှည့်ပြလိုက်ပါတယ် ။
တကယ်တမ်း ခင်ညွန့် လုပ်ရပ် ၊ ခင်ညွန့် ပြစ်မှုတွေ အတွက် တကယ်တမ်း ခင်ညွန့် ကျခံရမဲ့ အပြစ်ဒဏ်က ( ၇ ) နှစ် မဟုတ်ပါဘူး ။ သေဒဏ် နဲ့ ခင်ညွန့် ပိုင် ပစ္စည်းဥစ္စာအားလုံး အများပြည်သူပိုင် အဖြစ် သိမ်းဆည်းရမဲ့ အပြစ်ဒဏ်ပါ ။ ခင်ညွန့် ရဲ့ ပြစ်မှု နဲ့ ပြစ်ဒဏ်မှာ တခြားစီ ဖြစ်နေပါတယ် ။
ဆက်ဒမ်ဟူစိန် ၊ ဂဒါဖီ တို့ သွားရာလမ်းသို့ သွားရမဲ့ ခင်ညွန့်ဟာ ယခုအချိန်အခါမှာတော့ ဗမာပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ မြို့မေတ္တာဘွဲ့ကို လှလှပပ ခံယူလျက် ရှိနေပါတယ် ။
Lay Lay Ko
ကလိမ်ကကျစ် ခင်ညွန့်က မြို့မေတ္တာခံယူရန် ကြိုတင် အကွက်ချကာ တမင် ထောင်အကျခံပြသည့် ကလိမ်စေ့ငြမ်းဆင် လုပ်ဇာတ်ဖြင့် ပြည်သူနှင့် နိုင်ငံတကာကို မျက်လှည့်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုသည့် အယူအဆ (၂) says:
January 27, 2012 at 9:52 PM Reply
ဗိုလ်ခင်ညွန့် ကို မေတ္တာရှေ့ထားပြီး သမိုင်းတပတ် လည်တတ်ကြောင်း ကြိုတင် သတိပေးခြင်း says:
January 27, 2012 at 9:58 PM Reply
Facebook မှာ ဒီမိုဖက်တီး တက်ဂ် ပေးထားတဲ့ Hot News Journal က လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သန်လျင်မြို့ကို ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ ပြည်သူလူထုမှ ဝမ်းပန်းတသာနဲ့ ပန်းစည်းပန်းကုံးတွေနဲ့ ကြိုဆိုခဲ့ကြတဲ့ မြင်ကွင်းနဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့် မွေးရပ်ဇာတိမြေ သန်လျင်သို့ အလည်တခေါက် ပြန်ရာမှာ.. ကျောက်တန်းမြို့မှ ဆွေမျိုးသားချင်းများနဲ့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများမှ ကြိုဆိုတဲ့ မြင်ကွင်းနဲ့ ပါဒကြီးစေတီတော်ကို သွားဖူးမျှော်ရာမှာ ပန်းသည်လေးများမှ ကြိုဆိုနေပုံကို နှိုင်းယှဉ် ဖော်ပြထားပါတယ်..။
Hot News Journal ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကတော့ သင်းပါတယ်.. "မတူညီသော ကွဲလွဲမှုများနှင့် တူညီသော အပြုံးပန်းများ" တဲ့။
ရေးသားသူကတော့ ယခင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်မောင်သန်းရဲ့သမီး Hot News ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် မမ ဖြစ်ပါတယ်..။ ပြည်သူအတွက် ပေးဆပ် အနစ်နာခံခဲ့သူ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ သမိုင်းစွန်းထင်းခဲ့သူ တဦး ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ကို မနှိုင်းကောင်း နှိုင်းကောင်း နှိုင်းယှဉ်ထားချက်ပါ။
ကိုယ့်မွေးရပ် ကိုယ့်မြေ အစွဲ ဆိုတာကတော့ လူမျိုးတိုင်းမှာ ရှိကြပါတယ်...။ ဆက်ဒမ်ဟူစိန်တို့၊ ကဒါဖီတို့တောင် နောက်ဆုံးအချိန်မှာ မွေးရပ်မြေကို အားကိုးပြီး ခြေကုပ်ယူကြတာကိုး။ ဒီလို ကိုယ့်မွေးရပ်မြေက လူတဦး အရေးပါ အရာရောက်တယ် ဆိုရင် ဇာတိမြေက ဂုဏ်ယူကြတာ ဓမ္မတာပါပဲ။ သို့ပေသည့် သန်လျင် ကျောက်တန်းသား အားလုံးကို မဆိုလိုပါ...။ အမှားအမှန် အကောင်းအဆိုးကို လူတိုင်း သိကြပါတယ်..။ မွေးဋ္ဌာနေ ရောက်လို့ ကြိုဆိုကြတဲ့ လူအနည်းအကျဉ်းကို ပြပြီး လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ မနှိုင်းကောင်း နှိုင်းကောင်း နှိုင်းယှဉ်ထားတာ ဆိုးလှပါတယ်..။
ဒီသတင်းဂျာနယ် ဓာတ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ မဝေဖန်လိုပေမယ့် ဒီဓာတ်ပုံကို မြင်မိတော့ သတိရတဲ့ ပုံရိပ်တခုကတော့ ဆရာမောင်စိန်ဝင်း ပုတီးကုန်းရဲ့ ဝတ္ထုခေါင်းစဉ် စာသားလေးပါ... "ပစ်လိုက်တဲ့မျှား ပန်းဖြစ်စေ" တဲ့။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်မောင်သန်းရဲ့ သမီး Hot News ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် မမ ရဲ့ ရေးသားချက်ကို အဟုတ်မှတ်ပြီး ဦးခင်ညွန့် အနေနဲ့ ယခင် တီဗီမင်းသား ဘဝကလို အတင်းအကြပ် ဆင့်ခေါ်ထားတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေ၊ အသက်မပါတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ လက်ခုပ်သံကို အဟုတ်မှတ်ပြီး လက်ဗလာနဲ့ သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူအဟောင်းဆိုသလို ဆရာမောင်စိန်ဝင်းရဲ့ ဝတ္ထုခေါင်းစဉ် "ပစ်လိုက်တဲ့မျှား ပန်းဖြစ်စေ" ဆိုတဲ့ စာသားလို မဖြစ်ဘဲ အဲဒါနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် "ပစ်လိုက်သည့်ပန်း မျှားဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် ဆွတ်လိုက်သည့်ပန်း ကြိုးဖြစ်စေ" ဆိုတာမျိုးနဲ့လည်း လောကကြီးမှာ မထင်မှတ်တာတွေ ကြုံတတ်ဆုံတတ်၊ သမိုင်းတပတ် လည်တတ်ကြောင်း မေတ္တာရှေ့ထားပြီး ကြိုတင် သတိပေးပါရစေ ခင်ဗျာ..။
(Credit - ကိုဒီမိုဝေယံ)
"ဗိုလ်နေ၀င်းနဲ့ သူ့ မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်း ပုံရိပ်တွေ တကျော့ပြန်ပြီး ပလူပျံ နေရာယူ လာလိမ့်မယ်" လို့ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ဖြစ်လာပါပြီ says:
January 28, 2012 at 11:51 PM Reply
အပေါ်က Lay Lay Ko ရဲ့ comments --
"ကလိမ်ကကျစ် ခင်ညွန့်က မြို့မေတ္တာခံယူရန် ကြိုတင် အကွက်ချကာ တမင် ထောင်အကျခံပြသည့် ကလိမ်စေ့ငြမ်းဆင် လုပ်ဇာတ်ဖြင့် ပြည်သူနှင့် နိုင်ငံတကာကို မျက်လှည့်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုသည့် အယူအဆ" *****
ဆိုတဲ့ Lay Lay Ko ရဲ့ comments
(January 27, 2012 1:33 PM +
January 27, 2012 9:52 PM)
ဆရာ အောင်မျိုးထွန်း ရေးတဲ့ ﻿"ချဉ်ဖတ်အရောင်" နဲ့ တွဲပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါးရှင် အောင်မျိုးထွန်း ရေးသော ﻿"ချဉ်ဖတ်အရောင်"
ဗိုလ်ခင်ညွန့်စင်ပေါ်တက်လာတာကို တင်း နေကြတာ မြင်တော့ အံ့သြမိပါတယ်။
(ဒီ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေ၊ ဒီလုပ်ဇာတ်တွေ၊ ဒီမျက်လှည့်ပွဲတွေကို) ဟို အစောကြီးကတဲက ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပါတယ်။
"မကြာခင် ကျွန်တော်တို့ တွေ နာနာကြည်းကြည်း ဖြုတ်ချခဲ့တဲ့၊
သွေးချွေးမြောက်မြားစွာ ရင်းနှီးပေးဆပ်ပြီး ဆန့် ကျင်ခဲ့ကြတဲ့၊
မြန်မာပြည်ကြီး ဆင်းရဲစုတ်ပြတ် မွဲတေ သွားအောင် ထိုးချ တွန်းပို့ ခဲ့တဲ့
လက်ရင်းတရားခံ မဆလ ဗိုလ်နေ၀င်းနဲ့ သူ့ မိသားစု ပုံရိပ်တွေ ပလူပျံ နေရာယူလာလိမ့်မယ်" လို့ 
ဟို အစောကြီးကတဲက ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပြီးသားပါ။
အာဏာရှင် ပြည်ဖျက် သူခိုး၊ ဓားပြ ၊ လူသတ်ကောင် အကြီးစား ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ မြေး (ဦးအေးဇော်ဝင်း၊ ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း တို့) သား ဇွဲနေ၀င်းက
“ပါတီနိုင်ငံရေး လောထဲကို ၀င်ရောက်ဖို့ စိတ်ကူး မရှိပေမယ့် ပြည်သူလူထုထဲက ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အားပေးကူညီသွားမယ်။ ကျွန်တော် NLD ဦးဝင်းတင်ကို သိပ်တွေ့ ချင်ပါတယ်” ... တဲ့။
ဒေါ်စုတစ်ယောက် ၈၉ ခုနှစ်လောက်က အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာ မျိုးချစ်ရဲဘော်ဟောင်းကြီးတွေကို အပြတ် ကော ခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို သတိရတယ်။
“ကျွန်မဖေဖေ ဦးအောင်ဆန်းဘက် ရပ်မှာလား၊ ဦးနေ၀င်းဘက် ရပ်မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် အန်ကယ်တို့ခြံစည်းရိုးပေါ် ခွထိုင်မှာလား”
အနီ (NLD အလံအရောင်) နဲ့အစိမ်း (စစ်ယူနီဖောင်းအရောင်) ရောရင် ကျွန်တော့်အတွက် "ချဉ်ဖတ် အရောင်" ထွက်လာတာဘဲ မြင်ရပါတယ်။
(Credit - ဟစ်တိုင်)
လူသတ်ကောင် ခင်ညွန့် ၏ သတ်မိန့်အရ လူသတ်ပြီး အလောင်းဖျောက်မှု - ၁ says:
January 29, 2012 at 10:42 AM Reply
ခင်ညွန့် က လူသတ် အလောင်းဖျောက်ထားသည်ကို ပြန်ပေးရမည်
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ယင်းအထဲတွင် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦးတို့လွတ်မြောက်လာသည်။ ထို့ ကြောင့် ပြည်သူတွေ ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်ကြရသည်။ ယင်းအထဲတွင် ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ပါ လွပ်မြောက်လာသည်။ သူလွပ်မြောက်လာသည်နှင့် လူမှုရေးဘဲ လုပ်တော့မည် ။ တရားသဘောနားလည်သွားပြီဟု ပြောသံတွေ ကြားရသည်။ သူ့ စကားအတိုင်းဆိုလျင် သူကား တကယ့် လူကောင်းတယောက် ဖြစ်နေပြီလို့ ထင်ရသည်။
သို့ သော် ခင်ညွန့်က ယင်းသို့မဟုတ်သော လူစားမျိုး ။ ဗိုလ်ခင်ညွန့် မှာ လူမှုရေးအလုပ်ကို လုပ်ရအောင် လူသားတယောက်ကဲ့သို့စိတ်စေတနာတို့ဖြင့် နေခဲ့ သူဖြင့် မဟုတ်။ ခင်ညွန့်အာဏာ လက်စောင်းထက်ချိန် လူတွေ အကျဉ်းကျခံနေခဲ့ ရသည်။ အကျဉ်းထောင်ထဲ သေဆုံးကြရသည်။ နယ်စပ်ဒေသသို့ဒုက္ခသည်များစွာအဖြစ် ထွက်ပြေးရသည်။ ခင်ညွန့်သတ်မိန့် ပေး၍ သေဆုံးရပြီး အလောင်းဖျောက်မှု တခုမှာ ဤသို့ ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ မှ ဦးစံကျော်နှင့် ဦးဇင်းဇေယျသာမိမှာ ၁၉၉ရ-ခုနှစ်-သြဂုတ်လ-၉-ရက်နေ့ ဖမ်းဆီးခံရသည်။ ဖမ်းဆီးခြင်းမှာ နယ်စပ်ဒေသတွင် ရခိုင်တပ်မတော်နှင့် ဆက်သွယ်သည်ဆိုကာ ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ နှင့်အတူ ဦးညွန့် မောင်၊ ဦးခင်မောင် တို့ ပါသည်။ ဦးညွန့် မောင်ဆိုသည်မှာ တသီးပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် -၁၉၉၀-ခုနှစ် စစ်တွေမြို့ နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြိုင်ခဲ့ သူဖြစ်သည်။ သူတို့ အား ဖမ်းဆီးပြီး ကျနော့်အား သြဂုတ်လ-၁၁ ရက်နေ့ တွင် လာရောက် ဖမ်းဆီးသည်။ သို့ သော် ကျနော်က အခြား တနေရာ ရှောင်နေ၍ ထောက်လှမ်းရေး၏ အဖမ်းအဆီး မခံလိုက်ရ။ ဦးခင်မောင်မှာ မကြာခင် လွပ်မြောက်သွားပြီး ဦးညွန့် မောင်မှာ ထောင် (၃) နှစ် ကျခံခဲ့ ရသည်။ ကျနော်၊ ဦးစံကျော်၊ ဦးညွန့် မောင်တို့ မှာ အတူတူ နိုင်ငံရေး လုပ်ဘော်ကိုင်ဘက်များဖြစ်၍ ယခုကဲ့ သို့ဖမ်းဆီးရန် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
လူသတ်ကောင် ခင်ညွန့် ၏ သတ်မိန့်အရ လူသတ်ပြီး အလောင်းဖျောက်မှု - ၂ says:
January 29, 2012 at 10:48 AM Reply
ဦးစံကျော်နှင့် ဦးဇေယျသာမိတို့ နှစ်ဦးကို ကျောက်တော်မြို့ သို့ထောက်လှမ်းရေး (၁၀) မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟု သိရသည်။ လမ်းခုလတ် တောစပ်နေရာ အရောက်တွင် သူတို့ အား မြေတူးခိုင်းစေသည်ဟု ဆိုသည်။ ယင်းသို့ တူးခိုင်းခြင်းမှာ သူတို့ ကို မြှုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကိုယ့်ကျင်းကို ကိုယ်တူးပြီးနောက်မှာ သူတို့ အား ရက်စက်စွာ ပစ်သတ်လိုက်သည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ သို့ရောက်မှ ကျနော် ကြားသိရသည်။
စစ်တွေမြို့ ရှိ ထောက်လှမ်းရေး (၁၀) တွင် ယင်းအချိန်က ကိုထွန်းကြည်က နိုင်ငံရေးပါတီ ရုံးခမ်းများကို ၀င်ထွက်သွားလာပြီး စုံစမ်းထောက်လှမ်းနေသူဖြစ်သည်။ ယခုလည်း ဦးစံကျော်နှင့် ဦးဇင်းဇေယျသာမိတို့ ကို ဖမ်းဆီးသူမှာ ကိုထွန်းကြည် ဖြစ်နိုင်သည်။
ဦးစံကျော်မှာ ၁၉၆၉ ခုနှစ် ၀န်းကျင်က ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆုကို ဂိုးသမားအဖြစ် ရရှိထားသူ ဖြစ်သည်။ သူ့ ကို ရခိုင်ပြည်နယ်က လူတွေ အထူး လေးစားကြသည်။ ဇါတိက ကျောက်တော်မြို့ နယ်မှ ဖြစ်၍ သူ့ အား ကျောက်တော်မြို့ သို့ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ထောက်လှမ်းရေး (၁၀) တွင် ဖမ်းဆီးထားစဉ် နှိပ်စက်မှုများ ကမ်းကုန်သည်။ သူနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခံရသူများသည် ထောက်လှမ်းရေးများ၏ လက်ချက်ဖြင့် သေလုမတတ် ခံရသည်။ ယခုလည်း ဦးစံကျော်နှင့် ဦးဇေယျသာမိတို့ နှစ်ဦးအား ဆက်လက်ပြီး အဆက်အသွယ် ရှိသူများကို နှိပ်စက်ယင်း မေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်။
နောင်ကို သူတို့ လို ရခိုင်တပ်မတော်နှင့် အဆက်အသွယ် မလုပ်ဝံ့အောင် ဦးစံကျော်၏ ဇါတိမြို့ ဖြစ်သော ကျောက်တော်မြို့ သို့ခေါ်ယူသွားသည်။ ရခိုင်တပ်မတော် ဆိုသည်မှာ ဗိုလ်ခိုင်ရာဇါ ဦးဆောင်သော တပ်မတော်ကို ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ကျောက်တော်မြို့အရောက် တောစပ်တနေရာတွင် ယခုကဲ့သို့မြေကျင်းကို တူးစေခိုင်းသည်ဟု ဆိုသည်။
ဦးစံကျော်နှင့် ဦးဇေယျသာမိ တို့ နှစ်ဦးမှာ သေရတော့မည်ကို သိရှိထားသော်လည်း မြေကျင်းကို တူးကြရသည်။ ယခုကဲ့သို့ကိုယ့်ကျင်း ကိုယ်တူးနေရသည်ကို စဉ်းစားတိုင်း ကျနော်တို့အသဲဆတ်ဆတ် ခံစားရသည်။
လူသတ်ကောင် ခင်ညွန့် ၏ တပည့် ထောက်လှမ်းရေးများသည် ဦးစံကျော်နှင့် ဦးဇင်း ဦးဇေယျသာမိ တို့ နှစ်ဦးကို ရက်စက်စွာ ပစ်သတ်ပြီး သူတို့တူးထားသော မြေကျင်းတွင် မြှုပ်နှံထားလိုက်သည်။
လူသတ်လိုင်စင် ရထားသော ထောက်လှမ်းရေးတို့ သည် ဦးစံကျော်နှင့် ဦးဇင်း ဦးဇေယျသာမိ တို့ နှစ်ဦးအား ဤသို့ရက်စက်စွာ သတ်ခဲ့ပြီးနောက် အလောင်းဖျောက်လိုက်သည်ကို RFA မှ ကျနော် အင်တာဗျူး ပြောဆိုခဲ့သည်။ ပြီးတော့ ကျနော် ရေးသား ထုတ်ဝေဖြန့် ချီခဲ့သော "ရခိုင်ပြည်နယ်မှ လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံရမှု အဖြစ်အပျက်များ" စာအုပ်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
လူသတ်ကောင် ခင်ညွန့် ၏ သတ်မိန့်အရ လူသတ်ပြီး အလောင်းဖျောက်မှု - ၃ says:
January 29, 2012 at 10:50 AM Reply
ဤဖြစ်စဉ်တခုလုံးမှာ ပါဝင်ပတ်သူများကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါက မည်သူက ဥပဒေမဲ့ ပြုလုပ်သည်ကို သိသာနိုင်သည်။
ယခုဖြစ်စဉ်မှာ ဦးစံကျော်နှင့် ဦးဇင်း ဇေယျသာမိမှာ နယ်စပ်ဒေသတွင် ရှိနေသော လက်နက်က်ိုင် တော်လှန်ရေး ပြုလုပ်နေသည့် ရခိုင်တပ်မတော်နှင့် ဆက်သွယ်သည် ဆိုကာ ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသို့မတရားအသင်းဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ နှင့် ပါတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးထားသည်ဆိုလျှင် တရားဥပဒေအရ ရုံးတင် တရားစွဲဆိုစစ်ဆေးရန်သာ ရှိသည်။
ဒုတိယ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ သော ထောက်လှမ်းရေး (၁၀) မှ တာဝန်ခံဗိုလ်နိုင်ဦးနှင့် တပ်ကြပ်ကြီး ကိုထွန်းကြည်တို့အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ သူတို့ မှာ အထက်က တာဝန်ပေးချက်အရ ဖမ်းဆီးရသည်ဟုဆိုလျှင် ဖမ်းဆီးနိုင်ခွင့် သို့ မဟုတ် ဖမ်းဆီးပိုင်ခွင့်မှာ ယင်းအချိန်က ဖမ်းဝရမ်း မပါဘဲ အာဏာ လက်စောင်းထက်သည့် အခြေအနေ ရှိသည်။ ဖမ်းဆီးပြီးနောက် တရားရေးဆိုင်ရာဖက်သို့လွှဲပြောင်းပြီး တရားဥပဒေအရ ရုံးတင် စစ်ဆေး ရမည်သာဖြစ်သည်။
တတိယအချက်အနေဖြင့် ထောက်လှမ်းရေး (၁၀) သည် ဗိုလ်ခင်ညွန့် ၏ လက်အောက်မှာ ရှိနေရာ တာဝန်အရှိဆုံးသူမှာ ဗိုလ်ခင်ညွန့် သာဖြစ်သည်။ ယခုဖြစ်စဉ်၌ ယခုကဲ့သို့ဦးစံကျော်နှင့် ဦးဇင်းဇေယျသာမိတို့ မှာ ဖမ်းဆီးခံရသည်ကို ဗိုလ်ခင်ညွန့် သည် အစအဆုံး သိနိုင်သူသာဖြစ်သည်။ လက်တန်ရှည်ပြီး လူသတ်အမိန့် ကို ပေးနိုင်သောသူမို့ယခုဖြစ်စဉ်တခုလုံးတွင် ဗိုလ်ခင်ညွန့် သည် တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်သည်။
ဦးဇင်းဦးဇေယျသာမိမှာ မင်းပြားမြို့ နယ်မှ ဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် ကျောင်းထိုင်နေသော ဆရာတော် တပါးဖြစ်သည်။ စာချပုဂ္ဂိုလ်တပါးဖြစ်၍ လိုအပ်သော ဘာသာရေးစာအူပ်စာတမ်းများကို စစ်တွေမြို့ မှ လာယူကာ မောင်တောမြို့ နှင့် ကယုချောင်းခေါ် တက်ကနစ်မြို့ သို့ကူးသန်းသွားလာနေသော ဆရာတော် တပါးဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ဆရာတော် ဦးဇေယျသာမိကို ဦးစံကျော်နှင့် အတူဖမ်းဆီးပြီး ရက်စက်စွာ ပစ်သတ်လိုက်သည်မှာ ဘုရားသားတော်ဖြစ်သော ဦးဇင်းအဖို့ကံဝဋ်ကြွေးကို ခံစားရခြင်းဟု ပြောနိုင်သည်။ သို့ သော် ယင်းသို့ရက်စက်စွာ အသတ်ခံရသည်ကို တရားဥပဒေရှုဒေါင့်မှ ကြည့်လျှင် အလွန် လူသားမဆန်ခြင်းကို တွေ့ နိုင်သည်။
ရက်စက်စွာပစ်သတ်ပြီး သေဆုံးသွားသည်ဆိုလျှင် သို့ မဟုတ် ထောက်လှမ်းရေး (၁၀) တွင် နှိပ်စက်ပြီး လက်လွန်သေဆုံးသွားသည်ဆိုလျှင် ခွင့်လွှတ်ကောင်း ခွင့်လွှတ်ရနိုင်ပါသေးသည်။ ယခုကဖြင့် ယင်းသို့ မဟုတ်။ ထောက်လှမ်းရေးအချုပ်တွင် လူသတ်သမားတွေက အားရအောင် နှိပ်စက်ပြီး ကျောက်တော်မြို့ နယ်သို့ခေါ်ယူသွားကာ တောစပ်တနေရာမှာ သတ်ပြီး မြေမြုပ်လိုက်သည်ဆိုသည်မှာ လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိ။
လူသတ်ကောင် ခင်ညွန့် ၏ သတ်မိန့်အရ လူသတ်ပြီး အလောင်းဖျောက်မှု - ၄ says:
January 29, 2012 at 10:53 AM Reply
အားလုံးကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါမည်ဟု စိတ်ထဲမှာ စိတ်ကူး၍ ယခုဖြစ်စဉ်ကို ကြေအေးနိုင်စရာ တခု ရှိပါသည်။ ယင်းမှာ ရက်စက်စွာသတ်ပြီး ဦးစံကျော်နှင့် ဦးဇေယျသာမိ အလောင်းကို မိသားစုအား သို့မဟုတ် နယ်မြေခံ ဒေသက လူများအား ပြန်ပေးပါက လက်ခံနိုင်ပါသေးသည်။ ခုတော့ သူတို့ ကို သတ်ဖြတ်ပြီး အလောင်းကို ပြန်မပေး။ မည်သည့်နေရာမှာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ သည်ကို ဒေသခံတို့ အား မပြောပြ။ မိသားစုအား အကြောင်းမကြား။ အကယ်၍ ဗုဒ္ဒဘာသာထုံးတမ်းစဉ်လာအရ သရဏဂုံတင်ကာ မြေမြုပ်သဂြိုလ်ခဲ့ သောနေရာ၌ အမျအတန်းဝေခွင့်ကို ရရှိသည်ဟုဆိုက ဇနီး နှင့် သားသမီးတို့ကျန်ရစ်သူ မြေးမြစ်တွေက ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြပါသေးသည်။ ယင်းသို့ ခွင့်လွှတ်နိုင်အောင် ခင်ညွန့် က တခုခု လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဥပဒေစကားအတိုင်း ပြောရလျှင် ထောက်လှမ်းရေး (၁၀) သည် သူတို့ ၏ ကြွင်းကျန်ရစ်သော အလာင်းအား ဖျောက်ပစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်တကောင်လို သတ်ဖြတ်ပြီး လူသားနှစ်ဦးအား ယင်းသို့ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်းကို မည်သည့် ယဉ်ကျေးသော လူသားဆန်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များက ပြုလုပ်မည် မထင်။ ယခုမူ သူတို့ ၏ အာဏာ သက်ဆိုးရှည်ရေးအတွက် လက်ထိပ်ခတ်ပြီး ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်နှိပ်စက်ရဲသော ဗိုလ်ခင်ညွန့် ၏ တပည့်များသည် စင်စစ်အားဖြင့် သူ တို့ ဆရာအားကိုးကြောင်းသာဖြစ်သည်။
သို့ ဆိုလျှင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ မှ ဖမ်းဆီးပြီး ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ သော ထောက်လှမ်းရေး (၁၀) မှ ဗိုလ်နိုင်ဦး၊ ကိုထွန်းကြည်နှင့် ယင်းအချိန်က တာဝန်အရှိဆုံး ဗိုလ်ခင်ညွန့် မှာ ယခုအမှု၌ တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်သည်။ တိတိကျကျ ပြောရလျှင် ဗိုလ်ခင်ညွန့် သည် ယခုအမှုကို တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ပြီး အလောင်းဖျောက်ရသည်ကို တရားဥပဒေအရ စုံစမ်း စစ်ဆေးသည်ကို ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။
ခင်ညွန့် မှာ ယခုအချိန်တွင် လွပ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် လွပ်မြောက်လာပြီဖြစ်ရာ သာမန်ပြည်သူတဦးအနေလို ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းသယောင် လုပ်နေ၍ မရ။ သို့ အတူ သမတဦးသိန်းစိန်အစိုးရကလည်း ယခုအမှုကို ရုံးတင် စစ်ဆေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ လွပ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ထုတ်ပြန်တုံးက အပြစ်ရှိလျှင် ခွင့်လွှတ်နိုင်သည်ဆိုသောစကားမှာ ဤအမှုကို ရောင်ပြန်ဟပ်စေသည်။ အကြောင်းမှာ ဤသို့လူသတ် အလောင်းဖျောက်ခဲ့သည့် ခင်ညွန့် နှင့် တပည့်များမှာ မည်သို့ နည်းနှင့်မျ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို ခံစားရမည့်သူများ မဖြစ်နိုင်။
့ထောက်လှမ်းရေး (၁၀) မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ဗိုလ်ခင်ညွန့် မှာ ယခုအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထောင်ထဲသို့ပြန်လည်သွားမှ ကျနော်တို့ကြေအေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လူသတ်ကောင် ခင်ညွန့် ကို တရားဥပဒေမရှိဘဲ သမတဦးသိန်းစိန်အစိုးရက လက်ပိုက်ကြည့်နေသည်ဆိုလျှင် နောင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသတ် အလောင်းဖျောက်မှုများ မပေါ်ပေါက်နိုင်ဟု မည်သူကမှ အာမခံ၍ မရ။ ထို့ ကြောင့် ခင်ညွန့် က အလောင်းဖျောက်ထားသည်ကို ပြန်လည်ထုတ်ဖေါ်ပြီး မိသားစုအား မြေမြုပ်ထားသည့်နေရာအား ထုတ်ဖေါ်ပြသရန် ယခုအချိန်မှာ အထူး လိုအပ်နေသည်ဟု ပြောချင်သည်။
(ရင်းမြစ် - ရဲရင့်(ကနေဒါ) )
ငါးည တဲ့လား (ကိုလေး (အင်းဝဂုဏ်ရည်) ) says:
January 1, 2014 at 5:04 AM Reply
စားရတော့ ပုံစံ ...
ပါးချလို့ စုန်ကန် ...
ပုန်ကန်ရင် သတ်ပစ်မယ် ...
သေနတ်ကြီး ရှိတယ် ...
သတ်နည်းလည်း သိတယ် ...
တပ်ကြီးလည်း ရှိတယ် ...
အခုတော့ လက်ဆုပ်ကို ဖြေလိုက်ပါပြီ ...
ကမ်းလာတဲ့ သူ့လက်ကို ကြည့်လိုက်တော့…..
သူ့လက်ဝါးမှာ ငါ့ ပါးရာ ကြီးပါလား။
Credit - ကိုဇော်ဝင်း
ငါးည တဲ့လား (ကိုလေး (အင်းဝဂုဏ်ရည်) )